“ လူတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရပုံကတော့ Hyper-Arousal -> Flatline -> Natural Arousal, အဆုံး၌သဘာဝအရကျန်းမာသန်စွမ်းသောအမျိုးသမီးများဆီသို့ဆွဲဆောင် / မောင်းနှင်မှုဖြစ်သည်။ အခုတော့ဒီဟာကအတော်အတန်ကွာခြားမှုတွေရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် flatline ကနေထွက်လာတာကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။ ” (လင့်ခ်)
Gabe Deem မှဗီဒီယို - FLATLINE: သင်သိရန်လိုအပ်သမျှ
နော Church ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှ - ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အစဉ်အမြဲတည်မြဲနေမည်လား (အဆိုပါ nofap flatline) ။
အသေးစိပ်သိလိုပါသလား? flatline နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆောင်းပါးကိုလည်းကြည့်ပါ။ “ Porn Recovery and Mysterious Flatline”
“ Flatline” သည်ညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများရှိသူများအတွက်ပုံမှန်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအဆင့်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့က "flatlining ။ " ၎င်းသည်ယာယီဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းနိုင်သည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ယင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်စေနိုင်သည် အကွောငျး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏အစားဖြေရှင်းချက်၏။ (ကြည့်ရှုပါ လူကြီးလူကောင်းအဘယျကွောငျ့ flatlines ဤမျှလောက်ကျွန်တော်တို့ကိုတွှေသလဲ?).
ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဘယ်သူမှသေချာမသိဘူး။ သင့် ဦး နှောက်သည်မိမိကိုယ်ကိုအေးစက်စွာလည်ပတ်စေခြင်းနှင့်လိင်မှုနှိုးဆွခြင်း၏အဆင့်နှင့်အမျိုးအစားလိုအပ်သည်မှာကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်။ ၎င်းကိုဖယ်ရှားသောအခါသင်၏မသိစိတ်ကမျှော်လင့်ချက်များကိုမပြည့်မီသောကြောင့်သင်၏လိင်စိတ်သည်သင်၏ dopamine ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်“ စိတ်ပျက်ခြင်း” ကိုမှတ်မိစေသည်။ သိပ္ပံနည်းကျအသုံးအနှုန်းများအတွက်, ဒီက "ဟုခေါ်သည်အနုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်းအမှား။ "
ဒီတစ်ခါလည်းကြာရှည် abstinence ပင် (သူတို့နောက်တဖန်လိင်တက်ကြွဖြစ်လာသည့်အခါ Reversible လုပ်,) ကျန်းမာလူပျိုတို့အတွက်လိင်စိတ်အတွက်အနည်းငယ်ကျဆင်းစေပါတယ်။ သို့သော် flatline လက္ခဏာတွေ (ကျမဲ့လိင်အင်္ဂါမျှလိင်စိတ်, အစစ်အမှန်လူတွေကိုဆွဲဆောင်မှု၏အရှုံး) ၏ပြင်းထန်မှုဟာ flatline အတွက်မူလတန်းကစားသမားအဖြစ်နာတာရှည် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမှထောက်ပြသည်။
မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်များအတွက်လိင်စိတ် depressing အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှတရားခံအဖြစ် porn မှဒေတာအချက်ကြီးထွားလာ: လိင်မှုကိစ္စပြတ်လပ်မှု၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလေ့လာမှုများ.
Flatline ကိုယ်နှိုက်နှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနမရှိသေးပါ။ သို့သော်ပြန်လည်ထူထောင်နေသော porn အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များဖြစ်သည်။
တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ် PIED နှင့်အတူအသက်ကြီး (28-50) တိုတောင်းပြားချပ်ချပ်လိုင်းများနှင့်အတော်လေးအမြန်ပြန်လည်နာလန်ထူခံစားခဲ့ရသညျ။
ပြီးခဲ့သည့် 10 နှစ်များတွင် flatlines ၏အရှည်အဓိကအားမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးကြီးပြင်းတဲ့သူလူပျိုတို့အတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အခုတော့ပင်အချို့သောသူတို့၏ 30s အတွက်ပြင်းထန် flatlines သတင်းပို့ပါ။
အပြာအပြာသည်စွဲလမ်းမှုမှထွက်သွားသည့်အခါအာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ စွဲလမ်းမှုမှနှုတ်ထွက်သည့်အချိန်တွင် dopamine သည်နောက်ထပ်ထပ်မံကျဆင်းသွားကြောင်းနှင့် CRF နှင့် norepinephrine ကဲ့သို့သောစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများမြင့်တက်လာကြောင်းလူသိများသည်။ ဒီ combo libido ကိုသတ်နိုင်သည်။
ဒီထက် dopamine နှင့်တကွ, နောက်ထပ် desensitized ဆုလာဘ် circuitry ဦး နှောက်ထဲမှာ ဦး နှောက်ရဲ့လုံလောက်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုပေးစွမ်းသည် စိုက်ထူစင်တာများ (hypothalamus) ။ လိင်တံကိုရောက်ရှိဖို့ကျောရိုးကိုဆင်းခရီးသွားလာနည်းပါးလာ Impulses သတင်းပို့အတွက်လျော့နည်းဆွရလဒ်များကို။
စွဲလမ်းမှုအားလုံးသည်အခြေခံကျသော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆိုင်သော ဦး နှောက်ပတ်လမ်းကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေနိုင်သည်မှာရှင်းနေပါသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ, လိင်စိတ်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် morphing။ ကြှနျတေျာ့အယူအဆ (ပိုမိုနက်ရှိုင်းဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိုက်ထူအုပ်ချုပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျအဆိုပါ hypothalamus) ရှည်လျားသောရပ်နေ porn စွဲနေဖြင့်ပြောင်းလဲနေကြသည်။
ကောင်းမွန်သောသတင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည် လိမ့်မည် ရှောက်သွားလျှင်၊ သို့သော်လူတိုင်း၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားပြီး၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျဘဝနိမိတ်လက္ခဏာများကိုသတိပြုမိပြီးနောက်၌ပင်၎င်းတို့သည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ခြင်းမတိုင်မီ၎င်းတို့အားအိပ်စက်ခြင်း -libido အဆင့်ဆင့်နှင့်တွေ့မြင်ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ရှည်လျားသော reboot လုပ်သောအမျိုးသားများသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အနေဖြင့်ပြန်လည်ပြန်လည်ခံစားကြရသည်။
အဆိုပါသတင်းဆိုးကဒီ unnerving "flatline" အဆင့်ဖြစ်ပါတယ် လပတ်ကကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာတိုးတက်-ထောက်ပံ့ပေးမထားပါဘူးသောသူမူကား (ထွက်ရှိသော PMO ပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွရှောင်အကြောင်း, အဘယ်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုမှုနဲ့ဆက်စပ်နေတာဘယ်သူအားမျှမသိ နှင့် သူ့ဦးနှောက်ကပုံမှန် sensitivity ကိုပြန်သွားဖို့ခွင့်ပြုနေချိန်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်) ။ သင့်ရဲ့အခွအေနေနောက်ကွယ်ကသိပ္ပံအဘို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်ပြင်းထန်သောဆွရှောင်ရှားရန်လိုအပ်သောရဲ့ဒီဗီဒီယိုစီးရီးစောင့်ကြည့် Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့် Porn.
(အမြန်ဆုံး recover သူများသည် "reboot လုပ်ပါ”) သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောအစားထိုးပစ္စည်းများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း (Facebook ၏ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ် YouTube ဗီဒီယိုများ) ။ သင့်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကိုခေတ္တလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သငျသညျရံဖန်ရံခါအော်ဂဇင်အတွက်မိတ်ဖက်နှင့်အတူရောနှောဖို့ရှေးခယျြခဲ့လျှင်, ကောင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့် PIED နှင့်အတူအချို့သောယောက်ျားကသူတို့ reboot အစောပိုင်းသူတို့ကိုပြန်သတ်မှတ်။ အစပိုင်းတွင်မည်သည့်အော်ဂဇင်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုကအားကောင်းစေနိုင်သည်Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု,” နှင့်ရလဒ်မှာပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုနှေးကွေးစေသော porn မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သောလှုံ့ဆော်မှုမရှိဘဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံတစ်ခုတည်းကို အခြေခံ၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်လျှင်၎င်းသည်ပြproblemနာနည်းပါးသည်။ အထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်ပိုင်းတွင်။
1) porn ED များ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်,, 2) dopamine အဆင့်ဆင့်မှဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်အလွန်ရှည်လျားသောကာလများအတွက်တိုးမြှင်ကြောင့်အော်ဂဇင်မပါဘဲ porn မှ Edging, အထူးသဖြင့်ထိခိုက်ဖြစ်ပါသည် desensitization ။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်အတူဖြစ်စေ၊ မပါဘဲအနားသတ်ခြင်းသည်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည်။ အဘယ်သို့ငါ (အစွန်း) masturbate သို့မဟုတ်အော်ဂဇင်မပါဘဲ porn ကိုကြည့်ပါလျှင်?) ။ (သူသည်မိမိအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းမှအကြိုးခံစားခှငျ့မွငျသောကွောငျ့) တယောက်သောသူသူတိုင်းဆယ်ရက်တစ်ခါသာ ejaculated ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးသူနေဆဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့် ... နှင့် ED တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင်သင်ကသင့်ရဲ့လိင်စိတ် kickstarts လျှင်ကြည့်ဖို့ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ masturbate ချင်ပေမည်။ ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်နောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာခဲ့ဘူးတဲ့သူယောက်ျားတွေ၏ဥပမာများ။
သင့်ရဲ့လိင်စိတ် flatlines, သို့မဟုတ်သင်ကဲ့သို့သောအခြားအလက္ခဏာတွေရှိသည်သည့်အခါ "ကျမဲ့လိင်တံ," ကစိုးရိမ်ထိတ်လန်နှင့်သင်နေဆဲတစ်ခုစိုက်ထူအတင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့ porn နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ချင်မှလွယ်ကူသည်။ ဤသည်ပြန်လည်နာလန်ထူနှေးကွေးကြတယ်။ ရဲရင့်ခြင်းနှင့်စိတ်ရှည်ပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သင်သည်ပေးသည်သည်အထိ "ဒီစာအုပျက" ၌ဆက်လက်တည်ရှိ သင့်ဦးနှောက်နှင့်လိင်တုန့်ပြန်ကျောပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်းဆိုင်းဘုတ်များ.
သင်၏စိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်းကိုအတင်းအကျပ်သို့မဟုတ်စစ်ဆေးခြင်း = သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ ပို၍ ဆိုးရွားသည့်အရာ - ၁၀ ကြိမ်မှ ၉ ခုသည်၎င်းသည်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီဘဲအဆုံးသတ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ငါဆိုလိုတာကမင်းရဲ့လိင်မှုကိစ္စမှန်သမျှအတွက်မဟုတ်ဘဲမင်းရဲ့လိင်စိတ်ကိုကြည့်ဖို့မင်းလုပ်တာကိုရိုးသားစွာပြောလိုက်တာပါ။ ဆိုလိုတာကသင်ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိုတကယ်မစဉ်းစားပါဘူး၊ သင်၏လိင်တံသည်တကယ်စတင်ရန်ခက်ခဲသင့်သလား။ ယုတ္တိဗေဒသည်သင်ကိုယ်တိုင်“ စစ်ဆေး” ရန်မည်မျှမှားကြောင်းသင်ချိုးဖောက်လေလေ၊ ၎င်းသည်ရည်ရွယ်ချက်သုညမဟုတ်ဘဲသင်အားကျန်ရှိနေသောတစ်နေ့တာကိုသာဖြစ်စေသည်ကိုနားလည်လာလေဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ရောက်ရှိသောအခါ overdo မထားပါနဲ့။
ပုံမှန်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကိုထပ်မံမိတ်ဆက်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့်အလွယ်တကူယူလိုပေမည်။ အတော်များများကသုတ်ရည်လွှတ်အများအပြားအတန်းသို့ယောက်ျားတွေပြန်ပို့ကြပြီ။ ငါမရေတဲ့ထောက်ခံချက်ငါသိ၏။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ခြေကျင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါကချိုင်းထောက်များကိုမသုံးတော့ဘဲတစ်နေ့တွင် ၆ နာရီအပြည့်ဘတ်စကက်ဘောကစားခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသလော။ ယောက်ျားတွေကိုပြန်အပြားတစ်ပေါက်ထဲပြန်ထည့်ပေးတဲ့အော်ဂဇင်အပေါ်တစ်ချည်မျှင် - ငါတောအုပ်ထဲကနေထင်ခဲ့တယ်ရုံ ...
ဒါဟာမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းမတိုင်မီရှည်လျား masturbating စတင်ခဲ့တဲ့သူတွေကို, သာတရားမျှတစွာမကြာသေးမီကမြန်နှုန်းမြင့်ကိုကြည့်စတင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအမြန်ဆုံး porn-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများမှထမြောက်လေ့မှန်ပါပဲ။
သို့သော်ပြproblemနာ၏ပြင်းထန်မှုသည်မြင်သာထင်သာမရှိသောအချက်များနှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည်။ ပထမ ဦး စွာ ဦး နှောက်သည်သူတို့၏ sensitivity နှင့်ကွဲပြားသော dopamine ကိုတုန့်ပြန်မှုကွဲပြားသည်။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးဟန်ချက်ညီစေရန်ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန်အချိန်ပိုမိုလိုအပ်နိုင်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာသင်၏ပြproblemနာ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သောရေတွက်ပြီးသောပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တုံ့ပြန်မှုသည်သုတေသနပြုချက်အရနာရီပေါင်းများစွာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ၎င်းသည်“ အတွေ့အကြုံပြင်းထန်ခြင်း” နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ငါဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး။ ငါ ၁၀ မိနစ်လောက်အပြာရောင်ဘောလုံးတွေရှိနိုင်တယ်။ သူတို့အားဆယ်မိနစ်ထက်အခြားဘာမျှမ။ ED သည်ရရှိသောကြောင့်ဆိုးသည်…အမြဲတမ်းအလုပ်များနေရန်၊ အမြဲတမ်းလိင်ကိုမပျော်စားစေရန်ကြိုးစားသည်။ အချင်းလူ, ငါကကျော်ဖြစ်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။
လူတိုင်းတွင် Flatline ရှိ၍ ၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အမြဲတမ်းမစတင်နိုင်ပါ။ အများစုမှာယင်းသည်တစ်ပါတ်အကြာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော်လည်းအခြားသူများ (ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သည်) သည်နောက်ပိုင်းတွင်များစွာဖြစ်နိုင်သည်။ ငါအရှည်ဆုံးအချိန်ကငါမှာလုံးဝမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကရက်သတ္တပတ် ၇ ပတ်အများစုအတွက်အတိုတစ်ခုရခဲ့တယ်။ အဘယ်ကြောင့်လူတစ် ဦး သည် Flatline ကိုတွေ့ကြုံရကြောင်းသီအိုရီများစွာရှိပါသည်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, သင် porn ပေါ်မှာအရှုံးမပေးနှင့်လုံးဝမှာစဉ်းစားရပ်တန့်အဖြစ် flatline တစ် ဦး အကူးအပြောင်းဇာတ်စင်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာအစစ်အမှန်လောကတွေကိုသတိမပြုမိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုတကယ့်အဖြစ်အပျက်နဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့အတွေးတွေကမလွှမ်းမိုးနိုင်တာကြောင့်ဒီလိင်စိတ်ကကျဆင်းသွားတယ်။ (ကျွန်ုပ်အပြား၏အစနှင့်မည်သည့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်စပ်ဆိုင်သောစွဲလမ်းမှုပျောက်ဆုံးမှုအကြားပြင်းထန်သောဆက်နွယ်မှုရှိသည်ကိုတကယ်မှတ်သားခဲ့သည်။ )
စိတ်ကျေနပ်မှုကိုပုံမှန် sensitivity သို့ပြန်သွားရန်“ kickstart” အတွက်အကျိုးရှိသောဖိစီးမှုကိုကြိုးစားပါ။
အကျိုးရှိသောဖိအားအအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း, လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစာရှောင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဤအပျော့ဖိအားစိတ်ဓါတ်များပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုမှ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးသိပ္ပံနည်းကျဆွေးနွေးမှုအဘို့, ခရီးစဉ်ကို www.GettingStronger.org.
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသို့မဟုတ်သင်၏အပြားပြားအချိန်ယူနေလျှင်ကြည့်ပါ - အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအပေါ် Started နှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED မှငါ့ပြန်လည်နာလန်ထူရှည်လျားလွန်းတာဖြစ်ပါတယ်
Flatline ပုံပြင်များ (ကြှနျုပျတို့အတူတူပင်၏မရေမတွက်မြင်ကြပြီ)
၄၅ ရက် - Flatline မှပေးပို့သည်။ ငါလိင်ဆက်ဆံတာကိုငါမဆုံးရှုံးတော့ဘူးလို့မင်းပြောနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ညစ်ညမ်းတဲ့အတွက်ငါတကယ်မရှိဘူး။ ငါ့မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ဖို့တွန်းအားတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်။
ငါ flatline မှာပါ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဟာတောင်မှမပျော်ဘူးလို့ flatline မှာရောက်နေတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစဉ်းစားခြင်းသည်နှေးကွေးပြီးပုံရိပ်များသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်ရှုရန်ခက်ခဲပုံရသည်။ သူတို့ကပင်လျော့နည်းခြင်းနှင့်လျော့နည်းဆွဲဆောင်ပုံရသည်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါဒါတွေအားလုံးကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ၎င်းသည်ခံစားချက်ကောင်းမဟုတ်သော်လည်းမလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ခဲ့သည်။ ခဏတာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအဝေးကနေမြင်နေရတယ်၊ တကယ်ကဘာလဲဆိုတာ အဆိုပါခံစားယာယီနှင့်ဆွန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ လက်တွေ့ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့သည့်အရာများကို ပို၍ပိုပြီး တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ကိုသဘောပေါက်ခြင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်း၏မောင်းနှင်အားဖြစ်သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုသည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများပါ ၀ င်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုသည်မည်သည့်ပုံစံပင်ဖြစ်ပါစေ၎င်းသည် hardcore ဖြစ်စေ၊ softcore ဖြစ်စေ Hentai နှင့်ဖြစ်စေမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ငါအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများအကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ဖို့ဘယ်လိုမေ့လျော့ကဲ့သို့ဖြစ်၏, နှင့် porn ၏မရှိခြင်းကြောင့်ပိုပြီးသိသာအောင်လုပ်နေပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုမပျော်တဲ့အတွက်ကောင်းပါတယ် NoFap အလေ့အထကိုလပေါင်းများစွာငါတည်ဆောက်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်လတ်တလောမှာမအောင်မြင်နိုင်တာက Flatline ရဲ့ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသုံးလို့ရတယ်။ တစ်ပတ်လုံးငါ NoFap မှာတစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကျွန်တော်အခုထိမလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ အဲဒီအချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးကကျွန်တော့်အပြားပြားကိုမြန်စေတယ်လို့ထင်တယ်။
Reboot လုပ်တာကရှည်လျားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါ။ အရှုံးမပေးပါနှင့်
flatlining အပေါ်ငါ၏အကြံအစည်အတွက်နီးပါး5လအတွင်း
NoFapper တစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုစာတိုပို့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအကြောင်းမေးတယ်၊ အခြားသူများကအဆင်ပြေစွာရှာတွေ့လျှင်ကျွန်ုပ်တုန့်ပြန်မှုကိုဤနေရာတွင်ရေးမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်။
Flatlining အမှန်တကယ်ငါ့အဘို့ godsend ဖြစ်ထွက်လှည့်လိုက်ပါတယ်။
ငါကပြားချပ်ချပ်ကြောင့်ငါ့ကို၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းများမှတဆင့်ကမ်းရိုးတန်းအဘို့အမဖြစ်လျှင်ဒါဟာ 147 ရက်ပေါင်းဖို့လုပ်ဖို့အများကြီးပိုခက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိသုံးပုံတစ်ပုံ၏သုံးပုံနှစ်ပုံမှတစ်ဆင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းလိုပါပဲ။
ငါတကယ်လုပ်တာငါပြောပြီ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေစပြုကတည်းကပထမဆုံးအကြိမ်လိင်အရမဟုတ်သောအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်သည်လိင်စိတ်နိုးထမှုထိပ်ဆုံးရောက်နေပြီဟုခံစားမိသည်။ Flatlining ဆိုတာကတော့သင်ဟာစိတ်ရှုပ်စရာအကြောင်းမရှိလို့ဖွင့်မခံရဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ (NoFap မပါဘဲသင်လိင်ဖြန့်ချိမှုဟာအချိန်မရွေးအနည်းငယ်သာဝေးကွာသွားသည်ကိုသတိပြုမိလို့ပါ) ။
ဟေ့ကောင်တွေ။ အကြှနျုပျနှငျ့အများစွာကိုအခြားသူများအားအဘို့, ကွော flatline ကြောင့် (စသည်တို့ကိုအနိမ့်စွမ်းအင်, anhedonia, အိပ်မပျော်,) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပူးတွဲရဲ့ reboot ၏အရှိဆုံးကြောက်ခမန်းလိလိအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တခါတရံကျနော်တို့ကျိုးပဲ့ခံတစ်ဦးအမြဲတမ်းပြည်နယ်၌ရှိကြ၏စိတ်မပူပါနဲ့။ ငါကနေတွေ့ပြီရှည်လျား flatlining အကောင့်များစာရင်းကိုပြုစုခဲ့ကြ r / nofap, ybop, yourbrainrebalanced နှင့် rebootnation ။ ဤစာရင်းတွင်ပြည့်စုံသည်မဟုတ်, မျှော်လင့် relapse မပါဘဲနှင့် reboot ဖြစ်စဉ်တွင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဆုံးရှုံးစရာမလိုဘဲဆက်လက်သင်မျှော်လင့်ချက်နှင့်ရဲစွမ်းသတ္တိကိုပေးနိုင်ပါသည်။ "90 ကာလ 'တွေအများကြီးန်းကျင်ပစ်ချဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, များစွာသောလူ2လနှင့်2နှစ်အကြားကနေ flatline!
ဤတွင်အချို့သောရှည်နိုင်ရန်အတွက်,2လမှ2နှစ်, အကောင့် flatline ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်မအကောင့်လုပ်ဖို့အတူတူစာကြောင်း splice ခဲ့ရတယ်အနည်းငယ်ဖြစ်ရပ်အတွက်တှငျတှေ့ခဲ့တပြင်လုံးကိုမူရင်းခေါင်းစဉ်၏ဆက်စပ်ခြင်းမရှိဘဲသဘောမျိုးဖြစ်စေလျက်, ရိုးရှင်းစွာဖြတ်သူတို့ကို paste ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ စာသားကွင်းအတွင်းကျွန်မရှင်းလင်းချက်အဘို့, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကဆက်ပြောသည်ပါပြီ။
ကံမကောင်းစွာပဲ, လိင်နှစ်ခုသာ / သုံးပတ်အကြာတွင်ဈ flatline သို့သိသိသာသာပျက်ကျသွားသည်။ အဘယ်သူမျှမလိင်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါမရှိယုံကြည်မှုနှင့်အတူသြဂုတ်7၏နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်တိုင်အောင်, Flatline ဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်နှင့်ဈ (~2လအတွင်း) 2013 ရက်သတ္တပတ်ထိုသို့၌ထိုင် ...
ငါ3အပြီးအပိုင်ပြန်လည်မတိုင်မီ flatlines နှိပ်ပါ။ ပထမဦးစွာ flatline, ဒုတိယတစျခုရက်ပေါင်း 0-28 ထံမှခဲ့ရက်ပေါင်း 31-38 ထံမှခဲ့တတိယရက်ပေါင်း 47-52 (မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တစ်7ရက်သတ္တပတ် flatline: ~2လအတွင်း) မှခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တွင်ရက်ပေါင်း ၅၀ ကျော် (~ ၂ လ) ကြာမြင့်သော၊ ဒါကြောင့်စိတ်မပူပါနဲ့နောက်ဆုံးမှာပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်။
အကြှနျုပျ၏ flatline (~ 50 လအတွင်း)2ရက်ပေါင်းကြာမြင့်
၇၅ ရက်မှယနေ့အချိန်အထိရက်ပေါင်း ၅၀ (~ ၂ လ) ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ပြီးနောက်အလွန်ခက်ခဲသောစိုက်ထူမှုများ (ငါစွန့်လွှတ်ခဲ့ရပြီးကိုယ့်ရင်သွေးငယ်ပြန်ကောင်းလာမည်ဟုမထင်ခဲ့ပါ!)
ကိုယ့်အဘယ်သူမျှမ relapse အတူ reboot ၏ 105 ရက်ပေါင်းကိုပြု၏။ ငါပြားချပ်ချပ်လိုင်းကြုံတွေ့ပထမနှစ်လ
ငါကငါ့အလိင်စိတ်ပြန်ဆိုမှဘေးကင်းလုံခြုံမယ့်ထင်ပေမယ့်မ porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ် erotica နှင့်အနည်းငယ်မျှသာစိတ်ကူးယဉ်ရှစ်ပတ်ကြာ (2 လအတွင်း) ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါတစ်နေ့7န်းကျင် flatline မှစတင် ... အကြောင်းကိုတစ်ရက် 80 (2.5 လအတွင်း) သည်အထိ .lasted
flatline ၏ 70 ရက်ပေါင်း (2.5 လအတွင်း) ငါ၏အခါးပတ်အောက်မှာဖြစ်ပျက်ဘာမျှရိုးရှင်းစွာရှိခဲ့သည်, ငါ့ D ကိုလုံးဝသေပြီပဲ!
တစ်ဦး7တပတ်အကြာတွင် (~2လအတွင်း) flatline, လိင်စာရေးကနောက်ဆုံး5နေ့ရက်ကာလ၌
3 လကြာတဲ့ flatline ခဲ့ရပြီးကိုယ့်ဖြည်းဖြည်း2လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်တွေအကြောင်းကနေ recover လုပ်ဖို့စတင်ခဲ့
ကိုယ့်အကြောင်းကို 100 ရက်ပေါင်း (3 လအတွင်း) အတွက် flatlined
၈၆ ရက်ကြာမျော်လင့်ခဲ့သည်။ orgasms / clean reboot မရှိပါ။
ငါတစ်နေ့ 90 အပေါ် flatlining စတင်ခဲ့ပြီးကြောင့် 100 ရက်ပေါင်း (3 လအတွင်း) ကဲ့သို့သောအဘို့အသွား၏။ တော်တော်ရူးသွပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ flatline သည်ငါ "သေပြီဒစ်" နှင့်အနည်းဆုံး 1 မှီတိုင်အောင်နေ့ရက်ကို 125 ကနေ "ကျမဲ့လိင်တံ" ခဲ့ကြတယ်! (3.5 လအတွင်း)
ငါမကြာသေးမီက ... ငါ့လိင် drive ကိုမကြာသေးမီက vengance နှင့်အတူပြန် လာ. ခက်ခဲ mode ကို၏ 120 ရက်ပေါင်း (4 လအတွင်း) ကိုဖဲ့။
ပထမဦးဆုံး 100 + နေ့ရက်ကာလအဘို့ငါမအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေခံစားခဲ့ရနှင့် flatline အတွက်အများအားဖြင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြောင်းကိုတစ်ရက် 120 (4 လအတွင်း) ကတည်းကငါကြီးမြတ်ခံစားခဲ့ရပါပြီ။ ငါသိပ်စွမ်းအင်, Drive နှင့်ပြဌာန်းခွင့်ရှိသည်။
ငါ 120 ရက်ပေါင်းသည်အထိတော်တော်များများတစ်ခုလုံးကိုအချိန်ဟာပြားချပ်ချပ်လိုင်းတက်ခဲ့ (4 လအတွင်း)
(130 ရက်အကြာမှာ =4လအတွင်း): အံ့သြဖွယ်လိင်စိတ်။ NO ဦးနှောက်မြူ။ စိတ်ခံစားမှုငါရှိခဲ့မသိခဲ့ပါ။
ငါ (flatline ထဲမှာအများစုပေမယ့်ထွက်လာကြမှစတင်) ... နီးပါးခက်ခဲ mode ကို mark..of အဆိုပါ5တစ်လမှာဖြစ်ကြောင်းကို
4 သို့မဟုတ်5လခနျ့ [flatline ဖြစ်ခဲ့သည်] ။ ငါကတဦးတည်း flatline ပေမယ့်အနည်းငယ်အတက်အကျဖြစ်ခဲ့သည်ဟုပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သာမကြာသေးမီက [I] တစ်ဦးဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ5လအတွင်းသို့မဟုတ်ဒါမယ့်မိုးကြိုး ... တစ်လျောက်ပတ်သောလိင်စိတ်ပြန်ခံစားခဲ့ရပါပြီ
အနည်းဆုံး 120 ရက်ပေါင်း [ငါ flatlined] ။ 150 သလောက် (5 လအတွင်း) အဖြစ်ရှိခဲ့ကြပေမည်, သို့သော်မအောက်မေ့နိုင်ပါ။
ငါကြီးမားတယ်။ fuck ဆိုတဲ့။ flatline ။ ငါမ drive ကို၏6+ လအတွင်းပြောနေတာဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော့်တိုက်ခန်းကိုကျော်ကြည့်ဖို့ ၆ လလောက်ကြာခဲ့တယ်။ ငါအလားတူလှေ (6+ ညစ်ညမ်းအဆက်မပြတ် fapping ၏) ၌ရှိ၏။ အားမငယ်ပါနဲ့၊ အပြာကသင့်ကိုဘယ်တော့မှကုသပေးမည်မဟုတ်။ 😀ကောင်းမွန်သောအလုပ် !!!
ငါသည်ငါ့သဘာဝအလျောက်လိင်စိတ်နီးပါးထွက် evened ထားပြီးငါမရှိတော့ထိပ်နှင့်ကျင်းမှတဆင့်မယ်ငါနဲ့တူငါခံစားရတစ်ဦးစင်မြင့်သို့ရောက်ရှိပါပြီ။ ဤသည်6သို့မဟုတ်7လအတွင်းအကြားတစ်နေရာရာကိုယူ။
အဆိုပါ 7th လ၌ငါ၏လိင်စိတ်နောက်ဆုံးတော့ပြန် လာ.
ငါ 8 months ago စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ပုံကိုငါ့ flatline ချွတ်မှသာယခုဖြစ်၏။ သော့ကိုအားလုံးလှုံ့ဆော်ပုံရိပ်တွေထွက်ခုတ်ဖြတ်ဖို့ပဲ။
[အော်ဂဇင်ပြီးနောက်] တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ငါ fuck ဆိုတဲ့ငရဲနဲ့တူခံစားနိုးထချင်ပါတယ်။ ရုံ flatline ပေမယ့်စိတ်ကျရောဂါအပေါ်အပြည့်အဝမရ။ orgasm မရှိတော့ငါ့ကို Shit နဲ့တူခံစားရပါစေ။ ဤသည်သုည PMO နှင့်အတူ7သို့မဟုတ် 8 တစ်လသွားပြီးနောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါနှင့် flatline တက်ထဲက9လအတွင်းသည်အထိဖြစ်ခဲ့သည် (ဂါ)
ငါ9လကြာတဲ့ flatline ရှိခဲ့ပါတယ်။ အာရုံစူးစိုက်သို့မဟုတ်အမှုအရာ, ဦးနှောက်မြူ, သုညလိင်စိတ်မရှိလှုံ့ဆျောမှုသို့မဟုတ်စိတ်ခံစားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မပေးနိုင်ပါ။
ငါပြန်ပြောပြနိုင်အောင်လူကိုဟေ့, ငါနီးပါးတစ်နှစ် flatline လက္ခဏာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါ 26 နှစ်ရှိပြီဖြစ်၏ 19 လအတွင်းမ PMO reboot (~ 1.5 နှစ်) သို့့လူ့အဖွဲ့အစည်း again.I အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ feeling စတင်ပါပြီသုညလိင်စိတ်, များစွာသောပိုမိုဆိုးရွားလာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေနဲ့ Hard ရမယ့်မြို့အနီး-နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းခဲ့
လ 2-24: FLATLINE ။ (~ ၂ နှစ်) အဘယ်သူမျှမလိင်စိတ်။ လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအလိုဆန္ဒမရှိပါ။ asexual ခံစားခြင်း။ (မှတ်ချက်။ သုံးစွဲသူတွင်သူ၌ဆေးကုသမှုသို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါအခြေအနေမရှိကြောင်းရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်)
(သူကလူမှုရေး, မိမိ flatline ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပြောပါတယ်)
ဒီတော့ဒီနေ့ဖြစ်ပျက်နေတာကိုကျွန်တော်မယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်များကပြင်းထန်သောဝေဒနာခံစားနေရသည်။ ယနေ့ငါလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ငါ့ကိုပတ်ပတ်လည်ကလူအချို့ရှိသည်ဖို့မြို့လယ်မှဘတ်စ်ကားယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ... ..
link - သို့တိုင်ယနေ့ဖြစ်ပျက်မယုံနိုငျသညျ။ NoFap FTW!
အဆိုပါကြောက် Flatline လာနှင့်သွား။ နောက်ဆုံးမနက်ခင်းလေးမှာငါပြင်းထန်တဲ့အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့နိုးထခဲ့ရတယ်။ ငါအချိန်အကြာကြီးမကြုံခဲ့ရတဲ့အရာ။ အဆိုပါသုံးလိုင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုတတိယမြောက်နေ့တွင်အမှန်တကယ်ထိုးနှက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်သင်၏ဒစ် / ဘောလုံးများသည်သက်မဲ့အသားအရေအဖြစ်ကျုံ့သွားခြင်းကဲ့သို့ခံစားမှု၏လက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်။ အခုငါ့ရဲ့လိင်အင်္ဂါကပိုပြီးပုံမှန်ဖြစ်နေပုံရတယ်။ ဤအခိုက်အတန့်၌ကျွန်ုပ်၏ဒစ်သည်သဘာဝကျကျဖြစ်လျှင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒစ်ခ်ျခံစားသင့်သည့်အရာနှင့်တူနေပုံရသည်။ အရှင်ဝေး 12 ရက်ပေါင်းချ, နေ့ 13 အပေါ် .. ငါ့အအစီရင်ခံစာ
တစ်ဦး2ရက်သတ္တပတ်ကိုငါနေ့တိုင်းတစ်ဦးလားရှိသည်နှင့်ခိုင်ခံ့သောသွေးသားဆန္ဒရမ္မက်မယ်လို့ 2-တပတ်သံသရာ၏စုံတွဲ,, ပြီးတော့အခြား2ပတ်ဘာမျှမ (flatline?) ရှိခဲ့သည်။ ငါဟာပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ငါပိုပြီးပြီးပြီပိုကောင်းပါတယ်။
100 ကာလ၏အကြှနျုပျ၏ flatline ရုံသန့်ရှင်းသောအ shit အဆုံးသတ်
ကျွန်ုပ်သည် ၄၈ နှစ်အရွယ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုယနေ့ပင်အလုပ်မနေနိုင်တော့ဘဲမထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့ဖူးသည်။ ကျွန်ုပ်သူမကိုပွေ့ဖက်ရင်းအကြီးမားဆုံးသောဆိုးကျိုးများကိုကြီးထွားစေခဲ့သည်။ သူမငါ့ကိုမသွားရန်ငြင်းဆန်။ ငါ့ကိုသာ ဆက်၍ အဆက်မပြတ်ပွေ့ဖက်ကာအဝတ်အစားများကိုဆုတ်ဖြဲပစ်လိုက်သည်နှင့် ငါသူမကိုပင်ဆွဲဆောင်မဟုတ်တောင်မှစားပွဲပေါ်သူမ၏ညာဘက် fucked ။ ဒီဟာကဘာလဲ
ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျကိုသနားတျောမူပါ, ငါကတူခံစားရသောအရာကိုမေ့လျော့ခဲ့, ဒီခရီးတော်တော် EZ ထင်အံ့ဩစရာမရှိအမှန်တကယ်တစ်လိင်စိတ်ရှိသည်, သော fuck ဆိုတဲ့လိင်စိတ်တစ်ငရဲ။
flatline ၏ 70 ရက်ပေါင်း! ငါ၏အခါးပတ်အောက်မှာဖြစ်ပျက်ဘာမျှငါ့အ D ကိုလုံးဝသေ, ရိုးရှင်းစွာရှိခဲ့သည်!
အသက် ၂၀ - အေဒီ - နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ (၂ လအပြားလိုက်ပြီးနောက်) ငါအရမ်းခဲယဉ်းခဲ့တယ်။
အဲဒါကငါ့ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတွေဖြစ်စေတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထိုင်နေသည်သို့မဟုတ်အလုပ်အချို့ကိုလုပ်နေသည်။ ရုတ်တရက်အားလုံးသည်အပြာရောင်ထဲမှထွက်လာသည်။ ဤပြင်းထန်သောခံစားမှုပေါ်ပေါက်လာခြင်းကငါ့ကိုအော်ဂဇင်ရှာဖွေရန်တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ အဲဒီအခိုက်အတန့်မတိုင်မီကလိင်အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကိုတောင်ကျွန်တော်မတွေးခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့်ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာပဲ၊ ဒါပေမယ့်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ ၅ လအတွင်းမှာ၊ ပြားပြားနေတဲ့ကာလတွေမှာ၊ တခါတလေရက်အနည်းငယ်လောက်ကုန်လွန်သွားတတ်တယ်၊ အဲဒါကိုလူရှုပ်ဖို့တောင်ငါတောင်မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ။
ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့၊ ခင်ဗျားရဲ့ libido ဒါမှမဟုတ် mojo တစ်ခုခုကိုသင်မဆုံးရှုံးခဲ့ဘူး။
ဤတွင်အကောင်းဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူရှိနေသည့်အခါသို့မဟုတ်ရံဖန်ရံခါကျွန်ုပ်၏စိတ်သည်လိင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများသို့လှည့်လည်သွားသောအခါ (ကောင်းသောအကြံအစည်မဟုတ်ပါကသင့်အတွက်အရာရာကိုပိုမိုခက်ခဲစေသည်)၊ အများကြီးပိုချမ်းသာနှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်း, အပြည့်အဝအတွေ့အကြုံနှင့်ဝေးပိုပြီး sexy ။ သူကပြောတယ်ကောင်းတယ် သင်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူရှိနေသည်နှင့်အမျှသင်၏စိုက်ထူမှုသည်ယခင်ကထက် ပို၍ ခက်ခဲပြီးစိတ်အားထက်သန်မှုရှိနိုင်သည်။ တကယ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အရမ်းကိုလှည့်စားနေတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုကြိတ်ခြင်းကကျွန်တော့်ကို cum လုပ်ဖို့လုံလောက်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်မ NoFap during ကာလအတွင်းမိန်းကလေးတစ် ဦး ထက်ပိုပြီးနှင့်ဘောင်းဘီရှည်ထဲမှာ jizzed လုပ်ခဲ့ပါတယ်
အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမျိုးသမီးများရှေ့တွင်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူမှုရေးအခမ်းအနားများ၊ နိုက်ကလပ်များသို့ထွက်သွားပါသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများ၏မိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ဆုံပါ။ သင်ဟာ 'ဟော်မုန်းမရှိတော့ဘူး' တောင်မှ၊ မင်းကအမျိုးသမီးတွေနဲ့အမှန်တကယ်ပိုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာနဲ့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာအရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာစတင်လာမှာဖြစ်ပြီးသင့်ဝန်းကျင်ရှိအမျိုးသမီးများကိုသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကတုန့်ပြန်မှုပြုတဲ့အခါချိုင့်ဝှမ်းပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ ။ သူတို့ကိုစကားစပြောပါ၊ လှောင်ပြောင်ပါ၊ ရယ်မောပါ၊ သူတို့နှင့်ပရောပရည်လုပ်ပါ၊ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကသင်၏ချစ်စရာကောင်းသောသဘာဝအလိုဆန္ဒနှင့်သင့်ကိုဆုချပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းကိုမပြုခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည်ချိုသာလွန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်၏လက်၌လိင်ကိစ္စပြန်လွတ်လာမည်ဟူသောကတိမရှိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်၌အမျိုးသမီးများမရှိခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်၊ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နှိုးဆော်သံ? သင်ခဏတာအစာမစားဘဲသွားလျှင်၊ ပထမ ဦး ဆုံးသင်အမှန်တကယ်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ပြီးနောက်သင်သည်ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုကိုရပ်တန့်သွားသည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ မင်းရှေ့ရှေ့မှာကောင်းတဲ့အသားကင်ညစာကိုထည့်ပါ။
မင်းကပြားချပ်ချပ်နေမယ်ဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ၊ sexy အမျိုးသမီးတွေရှေ့မှာမင်းကိုရှေ့မှာထားပါ။
ထိုအသလောက်ဒီ subreddit အပေါ်ဆိုပါတယ်အတိုင်း, သင်တို့၏ကိုယ်ထည်အလုပ်မလုပ်ဘူး!
အလေးမချခြင်း၊ နှင့် kegel လေ့ကျင့်ခန်းစဉ်းစားပါ။ ဒီအရာတွေအားလုံးဟာမင်းရဲ့ mojo တွေဆီကိုရောက်သွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘယ်လိုလဲဆိုတာငါမသိဘူး၊ သူတို့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါအိမ်မှာထိုင်ပြီးဘာမှမလုပ်တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ငါ့တိုက်ခန်းမှာ NoFap ကိုသာအပြစ်တင်ခဲ့တယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသည်နှင့်အမျှ Flatline မှာလျော့နည်းလာနေသည် (ကျွန်ုပ်အတွက် NoFap ပိုမိုတင်းကျပ်အောင်ပြုလုပ်နေသည်) ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အခုလမ်းပေါ်မှာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုတွေ့တော့ငါ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကလျှပ်စစ်ခံစားမှုအသစ်ပြန်ရလာတယ်။
flatlining သည်သံသရာတွင်ဖြစ်မည်ဟုဆိုပါစို့။ ငါ NoFap နေသမျှကာလပတ်လုံး၊ Flatline အဆင့်များအတွင်းနှင့်အပြင်သို့ကျဆင်းသွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် NoFap မှထွက်ခွာရန်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ဘယ်တော့မှအသုံးမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းခံစားချက်ကိုနှစ်သက်သည်။ အလွန်များစွာ။
အဆိုပါ flatline ကိုဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်တစ်ပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဒါတစ်ချိန်က masturbating စဉ်းစားကြသူလူတို့အဘို့, အဲဒီအမှန်တကယ်ဘယ်လောက်ခက်ခဲတဲ့နားလည်သဘောပေါက်။
ငါထင်တာကတစ်ပတ်တခါတိတိကျကျတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့သူတွေကငါဟာ ၅ လနီးပါးတောင်ငါ့ကိုထက်စည်းကမ်းပိုပေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီလူတွေဟာ flatline အဆင့်ကိုဘယ်တော့မှရောက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘဲအမြဲတမ်း 'chaser effect' အဆင့်မှာရောက်နေလို့ပဲ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအဆက်မပြတ်တွန်းလှန်ရန်ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုမဖြစ်စေလိုပါ။ ငါကပိုအားကောင်းနေတဲ့ 'flatline' အဆင့်ကိုရောက်နေလိမ့်မယ် (ငါအခုတော့ဒါကိုတိတိကျကျကိုးကားထားတယ်)၊ ဒါပေမယ့်ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောအဆိုတွေနဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာရှိနေတဲ့နေရာမှာငါ့ရဲ့လိင်မှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုဟာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ Pre-NoFap ပါပြီ။ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ဤအတွေးအခေါ်များသည်ကျွန်ုပ်၌ရှိခဲ့သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည်အရာ ၂ ခုကြောင့်ဖြစ်သောဆင်ခြင်တုံတရားဖြစ်သောဆင်ခြင်တုံတရားဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်လိုက်သည်။
သင် NoFap လုပ်မယ်လို့မင်းကိုပြောခဲ့ရင် Flatline ဖြစ်စေမလုပ်ပါနဲ့။
flatlining နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စရာတစ်ခုခုအတွက်ငါထပ်ထည့်ချင်တယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်ကနောက်ဆုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာပေါ့။ အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်မမှာလိင်စိတ်လုံးဝမကင်းခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်သိချင်ခဲ့တယ်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၃၅ နှစ်လုံးလုံးကျွန်မဘဝမှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေများစွာဖြစ်ပေါ်စေတဲ့လိင်အကျင့်စွဲလမ်းထဲရောက်နေတယ်။ အဆိုပါ Flatline ငါ့ကို (ငါတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းကွာရှင်းပြတ်စဲခံခဲ့ရသည်) လိင်ကိုမေ့လျော့ခြင်းနှင့်ငါ့ဘဝကိုနိုင်ရန်အတွက်အာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဒီအပိုင်းရဲ့အဓိကအပိုင်းကငါ့ကိုဆေးစွဲတာနဲ့လိင်စွဲလမ်းစေတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုသပေးတယ်။
အခုကျွန်မမှာ libido အလွန်ကောင်းတယ်၊ အသက် ၅၂ နှစ်ရှိပြီ၊ ငါအရမ်းအိပ်မောကျနေပြီ၊ သေနိုင်တဲ့သစ်သားနဲ့နိုးလာတာကိုလည်းနှစ်သက်တယ်။ Lol ငါတစ်နေ့နေ့မှာကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့၊ ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိပ်မက်မက်ခဲ့ဖူးပေမဲ့တစ်ခါမှမခံစားခဲ့ရတဲ့လိင်ဆိုင်ရာချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးကိုရနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အမှုအရာပိုအစစ်အမှန် .. ပိုပြီးပုံပေါ် !!
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအရာများသည် ပို၍ မှန်ကန်သည်။ ပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ! အရူးပါ NOFAP ကိုစတင်တာနဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာကြီးကိုကျွန်တော်နှိပ်ခဲ့တယ်။ ငါစိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ဓာတ်ကျမှု, မှိုင်း, crappy ခံစားချက်ပြောနေတာပါ။ ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး တေးဂီတနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများသည်ပင်ပျော်စရာမကောင်းခဲ့ကြပြီးအပျက်သဘောအတွေးများကို ၂၄/၇ ပြိုလဲခဲ့သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုကောင်းလာတယ်။ ငါနေ့ ၄၆ ရောက်ပြီ၊ ကောင်လေးတွေကိုမင်းကိုပြောပြဖို့ငါအကောင့်တခုကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ ဘဝဟာပိုကောင်းလာတယ်။
သင် NOfap ၏အချက်ကိုသင်မေးကောင်းမေးကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ငါငါတို့အားလုံးသိတယ်၊ လက်ျာလက်လျှော့လိုက်ရုံကပိုလွယ်ကူသလား။ သို့သော်မပါ၊ ပိုကောင်းလာတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကငါအများကြီးပိုကောင်းခံစားခဲ့ကြသည်။ လိင်မှုကိစ္စပြန်လာပြီ၊ ဘဝအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ရွှင်လန်းမှုသည်အားအင်ပြည့်ဝနေပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကဲ့သို့ပြုမူခံစားမိသည်။ ဘ ၀ ဟာအရမ်းကောင်းတယ်
သင့် ဦး နှောက်အား REAL လှုံ့ဆော်မှုသို့ Re-wire ဖြင့်ခွင့်ပြုပါ။ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူကစားခြင်း၊ ထွက်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းစသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပျော်မွေ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ထားသောသဘာဝအရာများသည်ပျော်စရာကောင်းသည်။ ကျန်းမာသောအစားအစာ၊ အအေးမိခြင်းနှင့်အလေးမခြင်းများကိုစတင်ပါ။ တရားအားထုတ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။ အခြေအနေတွေတိုးတက်လာတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ flaccid အရွယ်အစားသိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ ဒီစတင်ကတည်းကဒုတိယသို့မဟုတ်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှစ။ (ငါ အခု 30 + ရက်ပေါင်း), ငါမဆိုနံနက်တုန့်ပြန်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ဒီဟာကို endocrine လား၊
(အသက် ၂၄ နှစ်) နောက် ၆ ပတ် - FLATLINE သည်အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး က "ဟုအဆိုပါ plug ကိုဆွဲထုတ်။ " ခံစားခဲ့ရသလိုခံစားရတယ် ကျွန်တော့်ယောက်ျားလေးကအသက်မဲ့ပြီးသေသွားပြီလို့ကြောက်တယ်။ ငါပြားချပ်ချပ်နှင့်ပတ်သက်သောပို့စ်များကိုဆက်ဖတ်နေသည်၊ ကျွန်ုပ်ထွက်ပေါ်လာတော့မည်ဟုအားပေးခဲ့သည်။ ငါလုပ်ခဲ့တယ်! နှစ်များတွင်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမြင်မက် ခဲ့၍ အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါငါပုံမှန်ပြန်ခံစားရတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးမပေးပါနဲ့။ https://www.yourbrainonporn.com/rebooting-accounts/rebooting-accounts-page-24/age-6-1-days-life-is-much-improved/
အဆိုပါ flatline ကြောက်စရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တောင်မှအဲဒါကိုနည်းနည်းပတ်ပတ်လည်ဝှေ့ယမ်းကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်, nope, အသက်မဲ့။ အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တစ်ပါတ်အဘို့ထိုအရပ်၌ဆင်းဆွဲထားခဲ့ကြပါပြီ။ https://www.yourbrainonporn.com/rebooting-accounts/rebooting-accounts-page-2/age-22-my-clarity-of-thought-has-improved-tenfold-lots-of-energy-i-have- တကယ့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများ /
ဦးနှောက်ဝုန်းဒိုင်းကြဲ (မတရားသော) ၏ရက်အနည်းငယ်ပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာများအတွက် flatline ။ အခြေခံအားဖြင့်ကိုယ့်မိန်းကလေးငယ်များ, လိင်, အရာအားလုံးအကြောင်းကိုလုံးဝလစျြလြူရှုခံစားရတယ်။ အဲဒီမှာကြှနျတေျာ့စိတျထဲ၏နောက်ကျော၌ငါ့ကိုမှာ nagged သော PMO သားရဲတကောင်ကနေအနည်းငယ်ချင်နေကြတဲ့စကားသံကိုဖွင့်ပေမယ့်အများအားဖြင့်ကျနော့်ကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။ အကြှနျုပျ၏လိင်တံရုံအလွန်ကျမဲ့အငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုငါ့လိင် drive ကိုထောက်ပံ့ပေးသမျှစက်တွေပေါ် plug ကိုဆွဲလိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အားလုံးမှာအဘယ်သူမျှမလိင်စိတ်။
I3ပတ် flatlined ။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်လုံးဝသေပြီးအသုံးမ ၀ င်သော်လည်းယခု၎င်းသည်ကြီးမားပြီးခိုင်မာလာသည်။
နေ့6- ကျွန်ုပ်၏လိင်တံနှင့် ပတ်သက်၍ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာတွေ့ရှိချက်များ၊ ငါ၏အ Streak စတင်ကတည်းကငါတစ် ဦး အပြည့်အဝစိုက်ထူ, နံနက်သစ်သားမရှိ, ရှိသည်နှင့် (ကအအေးအခါသို့မဟုတ်သင်ရေချိုးခန်းထဲကထွက်ရသည့်အခါကဲ့သို့) သေးငယ်ကြည့်ရှုသည်။
ငါယခုအချိန်အထိအကြောင်းကိုသုံး flatlines မှတဆင့်ပါပြီထင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုဖော်ပြရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်အလွန်တောက်ပသောလိင်တံနှင့်အတူတိမ်များနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျစရာများဖြစ်သည်။ ငါကအချိန်ကြာမြင့်စွာမှောင်မိုက်၌ထိုင်ကဲ့သို့ခံစားရတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။ တစ်ခုချင်းစီသည်တစ်ပါတ်ခွဲခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးကာလတိုတောင်းသည်။ ငါတကယ်ဒါကငါ့ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်မျှော်လင့်ပါတယ် အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူပြန် 85-90% မှဖြစ်ကြသည်။
ဒါဟာရှိပါတယ် ငါ porn အသုံးပြုသောသို့မဟုတ် orgasmed ကတည်းက2ရက်သတ္တပတ်ခဲ့။ ငါ့ရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုမခံရဘူး။ Lackluster စိုက်ထူခြင်းနှင့်အစောပိုင်းသုတ်ရည်လွှတ်မှု။ ငါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကနာရီများအတွက်ခဲယဉ်းကျောက်ဖြစ်လေ့ရှိတယ်! ဒီဟာပိုကောင်းလာမလား။ ငါစိတ်ပူမိတယ်။ [ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်] ဒီရောဂါလက္ခဏာတွေဘယ်လောက်များများဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့တကယ်ပဲကူညီခဲ့တယ်။ ငါအပြုသဘောလက္ခဏာတွေကိုတွေ့မြင်နေပါတယ်: နံနက်သစ်သားနှစ်ကြိမ်နှင့်အလယ်၌ -of- ညဥ့်စိုက်ထူပြီးခဲ့သည့်ညဥ့်, နှစ် ဦး စလုံးနှင့်ပတ်သက်။ 70-80 ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်အဝခံစားခဲ့ရ! ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေကိုစောစောစီးစီးမြင်ရတာကောင်းပါတယ်။
ငါသည်လည်းအလွန်ထူးဆန်းသောသေလွန်သောသူတို့သည်လိင်တံစင်မြင့်ထက်ကျော်လွန်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အချိန်ပြည့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံခံစားရသည်။ ငါမထိပဲစိတ်ဓာတ်တက်ကြွပြီးထက်ဝက်လောက်ခက်နေပြီးငါ့ကောင်မလေးကိုသာစဉ်းစားနေသည်။ ကောင်းသောနိမိတ်လက္ခဏာအားလုံး၊ ငါအဝါရောင်အုတ်လမ်းပေါ်မှာပါ!
ကောင်းပြီ, ဒီ FLATLINE အဆုံးသတ်ဘယ်လောက်ပါ!
သင် flatline ကိုရောက်သောအခါသင့်တွင်စွမ်းအင်မရှိပါ၊ ပို၍ ပျင်းရိသော၊ သေဆုံးနေသောလူ၊ libido စသဖြင့်ဖြစ်လာသည်။
ဒါက flatline ပဲ၊ အရာရာတိုင်းခဏမှေးမှိန်သွားတယ်၊ မင်းမှာလှုံ့ဆော်မှုမရှိဘူး၊ ဘာမှမရှိဘူး၊ အဲဒါဟာ tunnel vision လိုပဲ။
နေ့ရက်များကုန်လွန်သွားတယ်။ သင်ကအတက်များနှင့်ကျဆင်းမှုများကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ရှည်လျားတဲ့တိုက်ပွဲအပြီး၊ မင်းရဲ့လမ်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ပိုကောင်းလာတယ်။
သင်သည် Flatline နှင့် NoFap တွင်အပြောင်းအလဲများစွာကိုကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်၊ သင်ကိုယ်တိုင်၏ကမ္ဘာကြီးသည်ပြောင်းလဲသွားသည်၊ သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပြောင်းလဲမှု၊ အနံ့ပြောင်းလဲမှု၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှု၊ ၎င်းသည်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Flatline ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ၊ မှော်ဆန်သလိုခံစားရတယ်၊ မင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့မင်းမြင်တဲ့အရာအားလုံးကပိုပြီးလှပလာတယ်၊ အသံကပိုကောင်းတယ်၊ ကမ္ဘာကြီးဟာလှတယ်၊
မင်းကပျို့ချင်လို့ခံစားရလိမ့်မယ်၊ ခေါင်းကိုက်တော့မယ်၊ ဒါပေမယ့်ပုံမှန်တော့မဟုတ်ဘူး၊ PMO ကိုမသွားစေနဲ့၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကကောင်းတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်၊ ငါ့ကိုယုံကြည်တယ်၊
တက်တက်ကြွကြွနေပါ၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းပါ၊ အပြုသဘောရှိပါ၊ ဘယ်တော့မျှမပေးနဲ့၊ တစ်နေ့နေ့မှာအပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
Edit: စိတ်ခံစားမှု၊ ဒေါသဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်ခြင်းများကိုခံစားရခြင်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ သင်၏လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးသည် .. အရှုံးမပေးပါစေ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၊ လိုဏ်ဂူသို့မဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆုံးမှာအလင်းရောင်ရှိနေသည်။
အရာရာကိုမေ့ပစ်လိုက်ပြီ၊ ဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားရဖို့အဆင်ပြေတယ်၊ ​​မင်းဘယ်သူလဲဆိုတာမသိလိုက်တာကအဆင်ပြေပါတယ်။ အဲ့ဒီအရာတွေကိုငါဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ Flatline လုပ်ငန်းစဉ်ကအခွင့်အရေးအသစ်တွေအများကြီးရလာတယ်၊ မင်းကပုံကြီးကိုတွေ့လိမ့်မယ်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသည့်တိုင်သင်သည်အသစ်သောအရာများကိုစတင်လုပ်ဆောင်သည်။ ဘဝကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့ရပြီးပြန်လည်မွေးဖွားလာသူတစ် ဦး အနေနှင့်သင်ခံစားရလိမ့်မည်။
ယခု .. အင်တာနက်မှထွက်ပြီး .. ပြန်လည်မွေးဖွားပါ။
ငါ၏အလိင်တံအဘယ်သူမျှမဘဝမှာရှိခဲ့လျှင်အဖြစ် 1 ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်ကြောင့်ခံစားရတယ်။ ကအခြေခံအားဖြင့်သေကြောင်းကို။ ငါငရဲအဖြစ်ကြောက်လန့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်နှစ်သုံးပတ်ပြီးနောက်, နံနက်စိုက်ထူပြန်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ (ကသာခိုင်မာတဲ့ 20% လိုမျိုး) မှာခိုင်ခံ့မဟုတ်ကြပေမယ့်သူတို့ကတိုးတက်ခဲ့ကြပြီးကိုယ့်ကိုသူတို့မှန်မှန် [တစ်လမှာ] 70% ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။
ရက်ပေါင်း 60 ကျော် ... အဘယ်သူမျှမ Libido
ဤအကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်ရေးသားစဉ်ကကျွန်ုပ်သည် ၆၃ ရက် nofap သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်ခရီးတစ်လျှောက်လုံးအပြုသဘောဆောင်သောလက္ခဏာများတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ငါအဓိကအားဖြင့် ED ကြောင့်မိန်းမများနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန် porn ကိုချိုင်းထောက်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေတာကြောင့်ငါစတင်ခဲ့သည်။ ငါခဏခဏလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ် (၄ ကြိမ်မှ ၅ ကြိမ်အထိ)၊ ငါအရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။ ငါဟာပိုပြီးတော့ထိခိုက်လွယ်တာကိုသတိပြုမိပြီးအခုအချိန်မှာတော့အရမ်းကိုခံစားရတယ် ... ဆုတ်ခွာခြင်းမဟုတ်ပါ၊ တစ်ခါတလေမနက်ခင်းမှာနိုးလာတဲ့အခါငါအရမ်းအားစိုက်ထုတ်နေတတ်တယ်။
ငါမကြုံတွေ့ရသေးသောအရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏“ စစ်မှန်သော” လိင်စိတ်ပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ခရီးတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်ဟာမချိုမြိန်ဘူး။ ငါလိင်ဆက်ဆံဖူးတဲ့အချိန်ကစပြီးငါ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကငါ့ကိုအဲဒီမှာရောက်ခဲ့ပေမဲ့ငါစိတ်ဓာတ်မကျဘူး ဒီအရာရဲ့အဆုံးမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကငါလိင်တံဟာအသက်မဲ့တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတဲ့အထိငါ ထပ်မံ၍ (ဤသည် nofap အတွင်းဒုတိယအကြိမ်ထပ်ခါထပ်ခါ) လေယာဉ်ပျံနေကြောင်းသတိပြုမိလာသည်။
ငါ status update ကိုအနည်းငယ်မျှသာတင်လိုပြီးကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံများသည်အခြားသူများနှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သည်ကိုကြည့်ချင်ခဲ့သည်။ လူတိုင်းကွဲပြားတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါငါစိတ်ဝင်စားတယ်။
[အသက်အရွယ် 37, နေ့ 40 မျှ PMO] ကျွန်ုပ်အတွက် flatline အရာသည်ရက်ပေါင်း ၂၀ ခန့်သွားခဲ့သည်။ ထိုအခါ O. အလွန်ပြင်းထန်သောတိုက်တွန်းမှုငါ horniness အပေါ်မူးမူးခံစားရလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်စိုက်ထူရှိသည်မဟုတ်မယ်လို့ရှိခဲ့သည်။ ရက်အနည်းငယ်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ပိုးသေတ္တာများ ၀ တ်ပြီး ၀ တ်စားဆင်ယင်သည့်လမ်းမပေါ်တွင်ကားမောင်းခဲ့ပါကကျွန်ုပ်၌လုံးဝစိုက်ထူခြင်းမရှိသော်လည်းကားမောင်းနေစဉ်အို၌ရှိနိုင်သည်ဟုခံစားရလိမ့်မည်။ ရုံဤနွေး, စိုက်ထူခြင်းမရှိသော horniness ၏လှိုင်းတံပိုး။
စောင့်ကြည့်ရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်မီးခိုးမပါတဲ့ဒီအ ၀ တ်အစားတွေဟာညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရာမှာကျန်ရှိနေသေးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ငါ porn ကိုစကြည့်တုန်းကငါစိုက်ထူခြင်းမရှိဘဲ O တစ်ခုရတော့မည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ဒါက porn ကကျွန်မအပေါ်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်။ ငါ့ ဦး နှောက်က dopamine အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကိုစွန့်ပစ်လိမ့်မည်ထင်တယ်၊
ငါသည်းခံစိတ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြည့်ရှုသူများအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးသည်ဟုခန့်မှန်းမိသည်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများလိုအပ်နေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အခြေခံတွင်ရှိနေသည်ဟုခံစားလိုသည့်ညစ်ညမ်းအဆင့်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်လိုသည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့, နောက်တဖန်တစ် Flatline ၏မျိုး။ ဒီဟာကအဆင်ပြေပါတယ်။
တကယ်တော့အခုဆိုငါပြောတာက Flatline ကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံတာကောင်းတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်နှင့်စွဲလမ်းနေပြီ။ ပုံရိပ်မျှသာမဟုတ်ဘဲတကယ့်ဘဝ၌မရှိသောလှုံ့ဆော်မှုပုံစံများ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတွင်ကင်မရာသည်လှည့်ပတ်သွားသည်၊ မြင်ကွင်းတစ်ခုသည်နောက်တစ်ခုသို့မှော်အရိပ်များဖြတ်တောက်သည်။
ကျနော်တို့သေးစစ်မှန်သောဘဝမှ re-acclimated ကြသည်မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ flatline လာပါတယ်။ စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ရှင်ရုံမှာလာမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသမီးမှထိုင်နေကြတယ်နှင့်သူမအသိဉာဏ်အမှုအရာဟူမူကားနှင့်သူမ၏ဆံပင်နှင့်အတူကစားခြင်းကြောင့်ကျနော်တို့နှိုးဆော်ခြင်းရ, ဒါမှမဟုတ်သူမ cranberry သီးဖျော်ရည်၏ sips တာနဲ့သူမရဲ့မျက်တောင် fluttering စောင့်ရှောက်သောကြောင့်, ဒါမှမဟုတ်ပဲစဉ်းစားနေကြတယ် အဆိုပါအိပ်ရာပေါ်မှာငါတို့မိန်းကလေးနှင့်အတူထွက်အောင်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အတု dopamine အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုအဆင့်မှစပြီးအစစ်အမှန်ကမ္ဘာမှနှိုးဆွနိုင်သည့်အခြေအနေသို့ရောက်ရန်လိုအပ်သည်။ နှင့်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကျော်ငါဖြစ်ရပြီ။ ဒီဖြစ်စဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာမနက်ပိုင်းမှာပုံမှန်စိုက်ထူမှုတွေရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်သတိပြုမိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့အားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာငါနိုးပြီးတာနဲ့စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲ။
ဒါပေမယ့်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ငါးရက်လောက်လောက်မှာကျွန်မရဲ့ ဦး ခေါင်းထဲမှာပုံမှန်စိတ်ကူးယဉ်မှုများနဲ့နိုးထခဲ့ပြီးစိုက်ထူမှုများဟာအတော်လေးကြာခဲ့ပါပြီ။ သူတို့ကကားမောင်းနေရင်းဘာမှမစဉ်းစားမနေဘဲကျပန်းအချိန်တွေမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်။
ငါ reboot တစ်ခုစလုပ်ခြင်းကိုအမှန်ပင်မုန်းသည်မှာဘောလုံးများသည်၎င်းတို့သည်ပြန်လည်ကြီးထွားရန်မစတင်မီတကယ့်ကိုသေးငယ်လွန်းလှသည်။ သူတို့ဟာကျွန်တော့်ကိုယ်ထဲပြန်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေသလိုခံစားရတဲ့အချိန်တော်တော်များများက အကယ်၍ ငါသူတို့ကိုငါမချွတ်ခြင်းရပ်လိုက်သည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့သည်အနည်းဆုံးတူညီသောအရွယ်အစားဖြစ်ရန်လိုသည်၊
(အသက် ၃၈ နှစ် - ၆၀ နှစ်) ငါ noPMO ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော့်ရဲ့လိင်တံဟာညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့တဲ့ငါးတစ်ကောင်လိုခံစားရတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရှိတယ်။ ၎င်းသည်သေးငယ်ပြီး၎င်းအားလှုံ့ဆော်ရန်အဘယ်အရာမျှမပြုလုပ်နိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်အဖြူနှင့်အသေကြည့်နေသည်။ ဒါဟာအနည်းငယ်အာရုံကြော - wracking ပါပဲ အခုဆိုရင်ရက်ပေါင်း ၆၀ အကြာမှာကျွန်တော်ဟာအလိုအလျောက်ကြီးမားတဲ့စိုက်ထူမှုတွေကိုခံနေရတယ်။ ဒါဟာလာနှင့်သွားသော်လည်း။ ပြီးခဲ့သည့်ညကအေးခဲနေသောငါးရောဂါလက္ခဏာကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းအဆင့်သည်ယခုအချိန်ထိရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်းအချို့သောလှုံ့ဆော်မှုများက၎င်းအားအနည်းငယ်ကြီးထွားစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သို့သျောလညျး, ငါအမြဲတမ်းယခုနံနက်သစ်သားနှင့်အတူနိုးထတော်တော်လေး။ မာကျောမှုနှင့်ကြာချိန်ကွာခြားသည်။ လွန်ခဲ့သောအပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်မနက်၌စိုက်ထူခြင်းခံခဲ့ရပြီး၎င်းသည်နှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်၌အကြီးမားဆုံးနှင့်အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ငါအံ့သြသွားတယ်
(နေ့ 12) ကျွန်ုပ်သည်ပြားချပ်ချပ်မျှသာရှိနေသေးသည်၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်တုန့်ပြန်မှုမရှိ၊ သေးငယ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကို ၀ င်ရောက်ရန်မျှော်လင့်ထားရကြောင်းသိထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်ပူ။ မရသည်မှာရိုးရိုးသားသားနှင့်ကျွန်ုပ်၏ PMO အလိုဆန္ဒများကိုမလိုက်နာခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
Shrinkage သည်ဘုံအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏တင်ပါးဆုံတွင်းထဲသို့ပြန်လည်စုပ်ယူသည့်သင်၏အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး အနေဖြင့်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်။ ခဏကြာပြီးတဲ့နောက်မှာအခြေအနေတွေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပြီးတိုးတက်လာလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်ဟာ calipers နဲ့တိုင်းတာတာမျိုးမဟုတ်လျှင်ပြောရန်ခက်ခဲသည်။ ဒါဟာကျိန်းသေလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
[လက္ခဏာတွေ AF အပေါ်အစီရင်ခံစာကို restart ၏တစ်လ Ter] -ED (အချို့တိုးတက်မှုနှင့်အတူပေါ်မှာအလုပ်လုပ်) - အဘယ်သူမျှမနံနက်စိုက်ထူ (အချို့တိုးတက်မှု) - အေးလိင်တံ (Gone)
ကျွန်မအပူတပြင်းမိပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏လိင်တံအသေဖြစ်၏, ငါ့လိင်စိတ်ဖြစ်ပါသည်3ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်သေလွန်သောသူတို့သည်ဒါပုံမှန်လား? ငါအရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျတယ် ငါအရင် PMO ထက်တောင်ပိုဆိုးတယ်လို့ထင်တယ် ငါ porn stimulation တွေအများကြီးသုံးခဲ့ပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှငါ့ကို ED စေသော။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ၈ နှစ်ကြာဆက်ဆံရေးကိုဆုံးရှုံးဖို့ကြောက်လန့်နေတယ်။
အကြှနျုပျ၏လိင်စိတ်မျိုး၏ဤရက်သတ္တပတ်ထိုးကျလာခဲ့တာ (အပတ်က 10)။ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်ကြုံခဲ့ရသည့်ပြသနာကကျွန်ုပ်၏ရေအေးသည်ရေချိုးကန်ကဲ့သို့ပေါ်လာသောကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ ငါကဒါကိုစိတ်မ ၀ င်စားသေးဘူး၊ ငါဟာငါပြန်လည်ထူထောင်ရေးရဲ့နောက်အဆင့်တစ်ခုပဲလို့ငါထင်တယ်။ (သူ rebooting အကောင့်အပြည့်အစုံကိုဖတ်ပါ။ )
[နေ့ 35ငါဒီ site ဆီသို့ရောက် လာ. , သည်အထိ] ငါသည်ငါ့ ED ပြဿနာကြီးဘယ်လောက်အလေးအနက်သဘောပေါက်ခဲ့ပါဘူး။ အကြှနျုပျ၏လိင်တံငါ့ကိုနည်းနည်းစိုးရိမ်ပူပန်သောအခုအချိန်မှာယေဘုယျအားဖြင့်ဒါသေးသေးလေးနဲ့ကျမဲ့ခံစားရပါတယ်။
ငါသေပြီ '' လိင်တံရောဂါလက္ခဏာကိုငါသတိပြုမိတယ် 4-5 ရက်ခန့်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏လိင်အင်္ဂါသည်လုံးဝသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခံရပြီးကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အချည်းနှီးဖြစ်သွားသည်။ တကယ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်
ငါတစ်ခုခု ... တစ်ခုခု ... ပေမယ့် nope ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မနက်တိုင်းထ။ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ဘာမှမရှိဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်သိပေမယ့်အခုတော့ Urge မရှိသေးလို့ပါ။ ဒါ့အပြင်ဘယ်သူ့ကိုမှသူတို့ရဲ့လိင်တံအအေးခံစားရသည်ဟုခံစားရပါသလား ဒါမှမဟုတ်ဒါကငါ့ရဲ့လှည့်စားမှုကိုငါ့စိတ်ပဲ။
ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အားနည်းသည် ငါကျပန်းစိုက်ထူရ, ဒါပေမယ့်သူကမဆိုသဘာဝကျပါတယ်လျှင်အလွန်သေပြီ..lol။ လိုပဲအဲဒီမှာပါပဲ။ အများကြီးကျုံ့သွားပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး အချိန်ကုန်လာရင်ငါလိင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနိုးမလာတဲ့အခါလုံးဝပျောက်သွားတယ်။
ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်မငြိမ်သက်မှုအိပ်ပျော်ခြင်းအပြင်ငါ၌လည်းမရှိ ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ လူအများကဖော်ပြကြသည်။ အဲဒီအစားငါဘာမှမခံစားရ။ ကျွန်မမှာလိင်စိတ်နည်းနေသလိုပဲ။ နံနက်သစ်သားနှင့်စိုစွတ်သောအိပ်မက်များမရှိ။ အဘယ်သူမျှမအလိုအလျောက်စိုက်ထူ။ ထိုမျှမကမတရားသော။ ချိုချိုသာမရှိပါ ငါ၌လိင်ဆက်ဆံရန်အခွင့်အရေးရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ။
ငါ tango အတန်းတွေတက်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ကျိုးကြောင်းညီညွတ်တဲ့လူမှုရေးပေါ့။ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့ libido လက္ခဏာမပြသေးဘူး။ ငါလှလှပပမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူကခုန်နိုင်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုလုံးဝမရှိပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ ဦး နှောက်ကသိတယ်၊
နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ငါ PMO တစ်ပတ်သွားရင်နောက်တစ်ယောက်မကျန်တော့ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအရမ်းချိုလွန်းလို့ပါ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်ငါရင်ခုန်စရာကောင်းလာမယ်မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပဲ PM ကိုလုပ်လိမ့်မယ်။ ဤအရာသည်အခြေအနေများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ သင်သည်သင်၏လိင်စိတ်အမြဲပျောက်ကွယ်သွားပြီးသင်၏လိင်တံအလွန်သေးငယ်သောကြောင့်ပင်သင်၏အစာအိမ်ထဲသို့ပြန်လည်လိပ်လိပ်ကဲ့သို့ပြန်လည်နုတ်ထွက်လာမည်ကိုသင်စိုးရိမ်နေသည့်အချို့သောလူများသည်လများစွာသို့သွားရန်သင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှသင်ဖြတ်သန်းရလိမ့်မည်။ ကြောက်စရာပါပဲ အဲဒါတကယ်ပါ
အသက် ၃၄ နှစ်မှ ၈ နှစ်အထိ ED (တိုးတက်မှုပြသသည့်ဂရပ်များ)
ငါ့နေ့စဉ်အလှူရှင်များအနိမ့်ရှိရာရက်သတ္တပတ်ငါလုပ်ငန်းစဉ်၏အခက်ခဲဆုံးရက်သတ္တပတ်ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်“ ပြားချပ်ချပ်များ” ဖြစ်ပြီးသင်၏နေ့စဉ်အကျိုးအမြတ်များကိုပြန်လည်တွက်ချက်ရန်အတွက်သာလျှင် porn သို့ပြန်သွားရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင်ဤအရာသည်အလုပ်မလုပ်ဟုသင်စတင်စဉ်းစားမိသော်လည်း၊ ငါဆိုသည်ကား၊ သင်၏အချုပ်အခြာအာဏာတည်မြဲရန်အရေးကြီးဆုံးအချိန်များဖြစ်သည်။
ကျွန်မရဲ့တစ်ကိုယ်တော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေကစိတ်ပျက်စရာကောင်းလို့မိန်းကလေးတွေနဲ့အတူနေချင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ အဲဒါကကျွန်မကိုမိန်းကလေးတွေကိုချဉ်းကပ်ပြီးထွက်ပြေးစေတယ်။ 'ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ခွင့်မပြုဘူး' ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည် porn ကိုမကြည့်တော့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်မသိသောကြောင့် PMO မတော်တဆအရှုံးပေးခဲ့သည်။
မိန်းကလေးတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ခံစားမိပုံကိုအံ့သြမိလိုက်သည်။ ပြီးတော့ငါဟာချိုချိုလေးနဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက် (လိင်တူချင်းချစ်တာကို) ကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးမိန်းကလေးတွေကိုတက်ကြွစွာချဉ်းကပ်ပြီးလိုက်စားလာတယ်။ တညဉ့်၌ clubbing သောအခါငါဒီအံ့သြဖွယ်မိန်းကလေးတွေ့ဆုံခဲ့သည် နမ်းရှုပ်နေခြင်း၊ နမ်းခြင်း၊ ကြိတ်ခြင်းနှင့်အကများကြမ်းပြင်ပေါ်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ခန်ဓာကိုယ်အပြည့်အ ၀ ခံစားခြင်းတို့ဖြင့်အလွန်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့သည်။ ထိုညတွင်သူမနှင့်အတူပြန်လာရန်သူမကိုတောင်းဆိုခဲ့သော်လည်းသူမကကျွန်ုပ်အားလုံလောက်စွာမသိကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ငါအိမ်ပြန်သွားပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ချင်ပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ခွင့်မပြုခဲ့ဘူး
ကျနော်တို့ထပ်မံတွေ့ဆုံနှင့်သူမ၏အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အိပ်နေတုန်းကတည်းကကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့အချင်းချင်းအသည်းအသန်နမ်းပြီးတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြပေမယ့်ငါမထနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာမှမ တကယ်တော့ကျွန်တော့်ငပဲဟာအလွန်သေးငယ်ပြီးလုံးဝအားနည်းနေတယ်။ သူမလုပ်ခဲ့သမျှဘယ်အရာကိုမျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်အမှန်တကယ်နားလည်သဘောပေါက်မှုရှိပြီး“ မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရှက်စရာဘာမှမရှိဘူး” လို့ပြောခဲ့တယ်။
သူမသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူလုံးဝအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်နှင့်အဝတ်အချည်းစည်းဖြစ်ခြင်းကိုချစ်၏။ ကျနော်တို့ဖြေလျော့ပေးခြင်းများနှင့်အဆင်ပြေ, အဝတ်အချည်းစည်းအတူတူစကားပြောလဲလျောင်းတပြင်လုံးကိုညဥ့်နေခဲ့ရသည်။ ဒါဟာအကြီးခံစားရတယ်။
နက်ဖြန်နေ့၌ငါအိမ်ပြန်ရောက်တော့နှင့်အရာခပ်သိမ်းနေတုန်းပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့လျှင်ကြည့်ဖို့ masturbate ငါ့အခန်းထဲထံသို့သွားလေ၏။ အတွေ့အကြုံအဲဒီအချက်ဟာဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှေးဦးစွာငါခက်ရဖို့ရုန်းကန်, ငါလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့အခါမှာဒါဆိုငါကဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့အော်ဂဇင်ခဲ့မတိုင်မီဒါဟာငါသိတယ်အရှိဆုံးပြင်းထန်သောစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လက် action ကိုသုံးပြီးအကြောင်းကို 1.5 နာရီကိုယူ။
ဒီနရောမှာငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှရှောင်ခဲ့ယူဆ မဟုတ် ကောင်းလိုက်တာ! PMO မှငါ့ကိုမိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အတင်းအကျပ်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုများကိုလည်းသတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ A Catch 22. (ငါ rebooting, flatlining စသဖြင့်) မသိခဲ့ပါ
ယခုအခါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်စတင်သည့်အပတ် ၂ ပတ် ငါကပိုပြီးစိတ်အေးလက်အေးခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့လိင်တံကအရမ်းကျုံ့နေပြီး၊ ဘာကြောင့်လဲမသိဘူး၊
အလွန်ကြီးစွာသော libido ချိန်သီးပတ်ပတ်လည်လှည့်ပုံကိုအံ့သြစရာပါပဲ။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှလိင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးစိတ်ပျက်အားလျော့နေသူများထံမှဆက်ဆံမှုများပြုခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ရှုံးနိမ့်ခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ asexual နီးပါး၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ငါ့ကိုဆက်စောင့်ရှောက်ဖို့တစ်ခုတည်းသောအရာ, ငါ့ဖန်တီးသူ, သဘာဝနှင့် reboot ဖြစ်စဉ်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
သင်၏ system ထဲကစိတ်ကူးယဉ်ရယူခြင်းတစ်ခက်တာဝန်အဖြစ်ထွက်စတင်သည်။ ဒါဟာခဏတစ်အပြီးတွင်ပိုမိုလွယ်ကူရဖို့စတင်သည်။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏လိင်စိတ်တောင်သငျ့စိတျထဲမှာလုံးဝသင့်ထံမှထွက်သွားမှစတင်သည်ကြောင်းသတိပြုမိ။ သငျသညျလိင်အားလုံးကိုအလိုဆန္ဒဆုံးရှုံးဖို့စတင်ပါ။ ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်မစိုးရိမ်ထိတ်လန်စတင်ငါလိင်တံမရလဒ်များကိုမှနည်းနည်းနှင့်အတူစိတ်ကူးယဉ်အတင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာငါ fantasize ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်ရှိသမျှကိုငါမှာစိတ်ကူးယဉ်ဆောက်လုပ်ခဲအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာငါအဘို့အနိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်တူ၏။ တစ်ချိန်ချိန်တော့လုံးဝသွားကြကုန်အံ့။ စိတ်ကူးယဉ် conjure ရန်ခက်ခဲကျွန်မအဖြစ်ကောင်းစွာပဲအနားယူကြောင့်အမှန်တကယ်ကွယ်ပျောက်ပါစေအံ့သောငှါဖြစ်သွားခဲ့လျှင်ကျွန်မနေသေးတယ်။
ဤ (ငါ့ကိုထဲက SH * T က scaring ခဲ့ပါတယ်) ကဘောင်းဘီနှင့်ဦးနှောက်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးသည်လိင်စိတ်တစ် flatline မှု။
သို့သော်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးပို့စ်တွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့ညသည်အရုဏ်မတိုင်မီအမှောင်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်မှတ်မိနိုင်သည့်ပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့၊ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်လောက်မှာ၊ လှပသောအမျိုးသမီးများရှိနေခြင်း မှလွဲ၍ လူအများကြားမှာအလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းခံရသည်။ တိရစ္ဆာန်လိုခံစားရတယ် သို့သော်ကောင်းသောလမ်းအတွက်! ငါမြို့သို့ငါ့အ drive ကိုအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုသိသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပြေးနေတာကိုတွေ့တော့ရုတ်တရက်ကျွန်တော်သွေးထဲစီးဝင်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါလုံးဝစိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်ခဲ့, ဒါကပဲဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါနောက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတွေ့မြင်ပြန်အားကောင်းလာခဲ့သည်။ နောက်ထပ်နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲနှင့်ပိုမိုအားကောင်းနေတုန်းပဲ။
ကျွန်ုပ်အလုပ်သစ်အတွက်စိတ်အားထက်သန်နေပြီးအခန်းထဲတွင်အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ၀ တ်ဆင်ထားသည့်အ ၀ တ်အစားအနည်းငယ်ရှိသည်။ တစ်ယောက်ကငါ့အနားတွင်ထိုင်နေသည်။ (၅) မိနစ်လောက်ကြာရင်တင်ဆက်မှုတစ်ခုမှာ (ငါကတကယ်ကိုဂရုစိုက်တယ်၊ မယုံဘူးလား) ကျွန်တော့်ဘေးကမိန်းကလေးကဆံပင်နဲ့စကစားခဲ့တယ်။ ငါချက်ချင်းနှိုးဆော်ခြင်း - ငါမကူညီနိုင်! ကျွန်တော့်အမြင်တွင်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမျိုးသမီး ၅ ဦး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တကယ်သတိပြုမိလာသည်။ တချို့ကမျက်စိအဆက်အသွယ်လုပ်နေတယ်၊ ငါသူကပြောတယ် baboon တူခံစား! SSHHWWWIINNG ကျွန်တော်မသိခင်၊ ငါတို့မှာ liftoff ရှိတယ်
ရယ်စရာကောင်းတာကကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်တွေကိုဖုံးအုပ်ရင်းတင်ဆက်မှုတွေကိုလုံလောက်တဲ့အာရုံစိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါဖြစ်နိုင်ကာလအတွင်းနာရီဝက်ခန့်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအကြောင်းကိုစုစုပေါင်း 50% 60% စိုက်ထူရှိခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော၊ အမှန်တကယ်အလိုအလျောက် - ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံခြင်းမှဖြစ်သည်။ (၈၀%) အထိမြင့်တက်လာတဲ့အချိန်တွေကစာအုပ်တွေခုန်ဆင်းပြီးစတင်ခုန်ချဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်တွေရှိနိုင်တယ်။ ငါကုလားထိုင်ကိုပြန်ရှာပြီးရူးသွပ်ခြင်းကိုရှေ့ဆက်ထိုင်လိုက်သည်။ တစ်နေ့လုံးအစဉ်မပြတ်ငါကဲ့သို့သော horny ခံစားရတယ်။ ဒါဟာကောင်းကင်တမန်များဝိုင်းရံ Vanderbilt တနေ့လုံးဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိနိုင်ပါသည်။
လေးနက်သောယောက်ျားများ၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၀ ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် PMO စွဲလမ်းမှုနှင့်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမတွေ့မချင်းဤရောဂါပျံ့နှံ့မှုသည်အသက်အရွယ်နှင့်အလျောက်ပျောက်ကွယ်သွားပြီဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ခဲ့သည်။ ငါသူတို့ရဲ့အသက် 30 ကျော်ယောက်ျားတွေသရုပ်ဆောင် Viagra ကြော်ငြာများနှင့်အတူသမျှသောအနောက်တိုင်းဆေးပညာကော်ပိုရေးရှင်းဝါဒဖြန့်ဖို့ဝယ်ယူခဲ့သည်။
သင်တို့ရှိသမျှသည်ကိုသတိထားမိဖူးပါသလော ဒါဟာနောက်ကျ Viagra နှင့် cialis အငယ်နှင့်အငယ်ယောက်ျားတွေပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြပုံရသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာအားလုံး BULLSHIT ပါ! ငါ၏အဦးနှောက်အတွက်အကြီးအလိင်စိတ်ချိန်သီးဖွယ်ရှိသည်၎င်း၏တုံန်းကျင်၏ရှိသမျှနှင့်အတူပြုမိသည်မဟုတ်သော်လည်း, ငါသိသိသာသာတိုးတက်မှုမြင်နေပါ၏။
ယနေ့တွင်ရိုးရှင်းစွာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ 48 ရက်ပေါင်းနှင့်အပေါ်ကိုနှိပ်။ ငါအထွေထွေကုန်းရောက်ရှိပြီတိုးတက်မှုများကဲ့သို့ခံစားရသည်အထိငါ 90 ရက်ပေါင်းသွားကြဖို့စီစဉ်ထားသို့မဟုတ်။
ငါ2ကျော်ရက်သတ္တပတ်အကြာ PMO ရပ်တန့်, ငါအံ့သြဖို့, ငါစာသားလုံးဝမှာလုံးဝအဘယ်သူမျှမတပ်မက်ခဲ့ကြပြီ။ ငါ Flatlining သို့ခုန်တက်သကဲ့သို့ငါပုံရသည် ?? ငါဒီနေရာမှာအဲဒီမှာသေးငယ်တဲ့တောက်အနည်းငယ်တောက်ရှိခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကအလွန်နည်းပါးများနှင့်အကြားဝေး။ ငါနောက်ဆုံး ၁၆ ရက်အတွင်းမှာအားစိုက်ထုတ်မှု ၂ ခုပဲရှိခဲ့တယ်။ ငါနင့်ကိုနိုးထနေစေတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ရတာငါတကယ်မထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ငါခေါက်ဆွဲကဲ့သို့အားနည်းနေခဲ့ကြပြီ။
ဒီအအေးကြက်ဆင်အရာရုံဒါရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာဖြစ်ပါတယ်။ အလေးအနက်ထားပြောရရင်ဒါဟာငါ့ဒစ်ကိုပိတ်ထားသလိုမျိုး necro-organ ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုလိုပဲ။
(နေ့ ၅၂) ယနေ့ ၆ ပတ်ခန့်ကြာသောလူများပြောသောအရာနှင့်တူပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ယခုအထိစစ်၏အပြင်းထန်ဆုံးနှင့်စွဲစွဲမြဲမြဲတိုက်တွန်းခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာဂျော့ခ်ျ Foreman ကနေ sucker လာကြတယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်အိမ်၌တစ်ယောက်တည်းနေလျှင်ကျွန်ုပ်လဲသေမိပါလိမ့်မည်။
အလုပ်ခွင်တစ်ခုလုံးနီးပါးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးများသည်ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲအမြဲတမ်းဝင်ရောက်နေသည်။ ဒါကသူ့ဟာသူအတွက်ဒါပိုင်ထိုက်သောမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကငါ့ကိုစားသုံးသောရက်စက်အတိအကျကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အပြင်းထန်ဆုံးသောစိုက်ထူမှုများသည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ တ်စုံဘောင်းဘီကိုထိုးဖောက်ရန်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်စွဲလမ်းနေစဉ်အတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောမည်သည့်အရာနှင့်မဆိုကောင်းချီးတစ်ခုသာမကကျိန်စာလည်းပါ ၀ င်သည်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်ခါး၌အလွန်အမင်းဖိအားအချို့ကိုအချည်းနှီးသက်သာစေရန်ကုလားထိုင်ပေါ်မှထိုင်။ ဆီးကျိတ်၏isရိယာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်
၎င်းသည်နောက်ဆုံးတွင်ရပ်တန့်သွားသောစစ်ပွဲဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်သောအခါမျှထိမိခြင်းမရှိသော်လည်း (ကျယ်လောင်စွာအော်ဟစ်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်) ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆိုင်ရာအတွေးများကိုမလိုအပ်ဘဲမည်သို့ဆွဲဆောင်နိုင်မည်ကိုစဉ်းစားပြီးစိတ်ထဲတွင်စွဲကျန်နေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏တံဆိပ်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် Edging သည်စိတ်တွင်အမြဲတမ်းရှိကြောင်းညွှန်ပြရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်သွင်းမှုမတိုင်မီသောတွန်းအားမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်ပြမှုအမြဲရှိပါတယ်။ ငါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလျှော့ပေးလိုက်လျော, ငါ့ယာယီအခြေအနေများသာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်သို့ရင့်ကျက်ဖို့တားဆီး။
ယနေ့စစ်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သတိပြုမိသောကောင်းသည့်အရာတစ်ခုမှာ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အတွေးများမဟုတ်သကဲ့သို့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကျွန်ုပ် ဦး တည်လိုခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏တစ်ခုတည်းသောဆန္ဒမှာမိန်းမနှင့်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်ရန်အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကျွန်ုပ်တွင်မရှိသော်လည်း၎င်းသည် reboot အလုပ်လုပ်နေကြောင်းသိရခြင်းကအလွန်အားတက်စရာဖြစ်သည်။
(နေ့ 30) အကြှနျုပျ၏ flatline အခြေခံအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်စတင်ခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်ငါ flatline ကိုပဌနာသည်အနည်းဆုံးအဘယ်အရာကို။ ငါအသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ငါမှန်းဆအကြောင်းကို 70-80% ရာခိုင်နှုန်းဟာတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိနံနက်စိုက်ထူရလုပ်ပါ။ တချို့ကရက်ပေါင်းငါလိင်မောင်းသို့မဟုတ်အစား horny ခံစားရပေမယ့်အမြဲသေပြီ-ဒစ်လက္ခဏာတွေနဲ့အတူရှိသည်။ ငါသည်ငါ့လိင်စိတ်သည်ဤ jolts စေသည်ခေါ်, သူတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်နာရီအဘို့ကြာရှည်။
ဒါပေမယ့်ကျန်တဲ့အချိန်တွေ၊ ၉၅% နိုးနေချိန်မှာငါဟာလုံးဝလိင်စိတ်တုန်လှုပ်စရာလုံးဝမရှိဘူး။ အဘယ်သူမျှမအလိုအလျောက်စိုက်ထူ။ လှပသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုသင်ကြည့်သောအခါသင်၏ ဦး ခေါင်း၌“ ကောင်းပြီ၊ ငါအရမ်းသိချင်တယ်” လိုသင်၏ပုံမှန်အတွေးများကိုသင်မြင်သောအခါအလွန်ထူးဆန်းသောခံစားမှုဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းသင်၌လိင်ဆိုင်ရာအကြံအစည်များသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်များရှိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ထူးဆန်းပြီးကျွန်ုပ်အတွက်ကြောက်စရာအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ သင်ကနဂိုကတည်းကရှိနေတဲ့အလား ...
[တစ်ခါတစ်ရံ flatline အဖြစ်ပြားချပ်ချပ်စိတ်ခံစားမှုကိုတက်ပြသထားတယ်။ ] 87 နေ့s ငါအသက်တာ၏ spurts နှင့်အတူရှည်လျား flatline ခဲ့ကြပြီ။ ငါနီးပါးခံစားချက်မှလေ့ကျင့်ရတယ်။ ငါဒါပုံမှန်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ် ဖြတ်သွားလိမ့်မယ် ဘဝ၏နိမိတ်လက္ခဏာများကကျွန်ုပ်အားအလင်းကိုပြသည်။ ငါ့မှာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချို့ရှိသေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ ငါသော်လည်းတ ဦး တည်းမှာအလွန်ပျော့ပျောင်းခံစားရတယ်။
(reboot သို့2ရက်သတ္တပတ်) အခြားဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာသည်။ ငါဟာအမြဲတမ်းပင်ပန်းနေပြီးဝါဂွမ်းနဲ့ပြည့်နေသလိုငါ့ခေါင်းကခံစားရတယ်။ ငါအခုဘဝမှာ“ ပစ္စုပ္ပန်” ကိုတကယ်မခံစားရဘူး။ ကျွန်တော့်လိင်တံကကြည့်နေတုန်းပဲ၊ ဒါကြောင့်ထဲကတုံ့ပြန်မှုအများကြီးရနိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။
ကျွန်ုပ်၏လိင်အင်္ဂါများပြင်းထန်စွာကျုံ့ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံသည်။ WTF? ငါ့ဘောလုံးကငါ့ဒစ်ထက်ပိုကြီးတယ် တကယ်လိုက်တယ် အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါ့နံနက်သစ်သားပြန်လာဆိုတဲ့အချက်ကိုကျိန်းသေအပြုသဘောဆောင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
(နေ့ 28) အကြှနျုပျ၏လိင်တံရုပ်ပြသေးငယ်သည် - အကြောင်းကိုမတည်ရှိအကြောင်းကို (တစ်ခါတစ်ရံငါဆီးသွားနေစဉ်ကကိုင်ပြီးကိစ္စများပင်) ။
နေ့ 17 pmo အခုမဟုတ်ဘူး။ တချို့ရက်တွေမှာငါဟာလိင်စိတ်တွန်းအားပေးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ချိုချိုသာသာခံစားနေရတယ်၊ ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းသေသွားတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့အတူ! ငါ့ငပဲအရမ်းရယ်ရတယ်မဟုတ်လား ဒီနေ့ဟာငါဟာပိုပြီး ဦး ချိုနေတဲ့ပထမဆုံးနေ့ပဲ။ ဒါပေမယ့်အရင်ကလိုမသေခဲ့ဘူး။
ငါ၏အ flatline အကြောင်း။ လူတို့သည်မိမိတို့ဒစ်အသေဖြစ်၏တူသောသူတို့ခံစားရလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ကပုံကြီးချဲ့ arent ။ IIT စာသားမဲ့ခံစားရပါတယ်။ ဒါဟာန်းကျင်သယ်ဆောင်ရန်ရှိသည်ဖို့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကဲ့သို့ခံစားရ၏။
ဒါကြောင့်ရက်အနည်းငယ်အကြာကျွန်မ PMO-သွေးဆောင် ED ပြီးနောက်အောင်မြင်တဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. တင်ခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်မှာသူကအကြီးခံစားရတယ်ငါတကယ်ကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုနောက်ရက်ပေါင်းများစွာကောင်းတဲ့နံနက်သစ်သားခဲ့ငါလွယ်လွယ်ကူကူနောက်တဖန်ငါ၏အသိသာသည်အခြားနဲ့အတူ PIV လိင်ဆက်ဆံနိုင်နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။ http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/yi9ly/day_28_suffered_from_ed_progress/
မနေ့ကမှစပြီးငါထပ်ပြီးလေယာဉ်စီးနေသလိုခံစားရတယ်။ “ Dead Dick” နှင့်အားနည်းသောနံနက်သစ်သားများကိုကယ်တင်ရန်ပြောဆိုရန်အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းမရှိ။ ငါမယုံသေးဘူး၊ ငါ့ဘဝမှာဒါကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုငါမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူး။
ကိုယ့်ကိုသူတို့အပြား-line ကာလစိတ်ပူသောသူမည်သူမဆိုအဘို့အကြှနျုပျ၏ဇာတ်လမ်းတစ်ဦးအမြန်အကောင့်ပေးချင်တယ်။ nofap မှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုကြိုးစားပြီးစဉ်အတွင်းကျနော်ပျက်ကွက်မတိုင်မီ 14 ရက်ပေါင်းနှင့် 11 ရက်ပေါင်း သွား. , နှစ်ဦးစလုံးကာလအတွင်းမှာကျွန်မတစ်ခုလုံးကိုအချိန်အလွန် horny ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ၏အတတိယ (လက်ရှိ) ကြိုးပမ်းမှုတွင်, ငါစာသားနေ့ကတဦးတည်းအနေဖြင့် Flat-တန်းစီစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါမြင်နေခဲ့မိန်းကလေးငါ့ကိုစွန့်ပစ်, ငါတောင်တစျခုလုံးကိုတစ်လသွားမှာအားလုံးအမျိုးသမီးတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပြီးနောက်ငါ့ကိုယ်ပိုင်လိင်မေးမြန်းစတင်အထူးသဖြင့်အပြီးအလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါမသွားငါ့ကိုစောင့်သျောမျှမျှတတတသမတ်တည်းနံနက်သစ်သားရှိခြင်းခဲ့သည်။
၄၅ ရက်လောက်မှာ၊ ကျွန်မရဲ့လိင်စိတ်တဖြည်းဖြည်းပြန်လာတာကိုစတင်ခံစားလာရပြီးတစ်နေ့ ၆၅ ခုနှစ်လောက်မှာတော့သူဟာအင်အားအပြည့်နဲ့ပြန်ရောက်လာပြီ။ ငါကစဉ်းစားစရာမလိုဘဲတစ်နေ့လုံးကျပန်းစိုက်ထူရှိခြင်းဖြစ်၏။ ငါလမ်းပေါ်မှာမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုမြင်လျှင်ရုံစိုက်ထူရ။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်သည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ရှိခဲ့ပြီးချစ်စရာကောင်းသောဆွစ်ကောင်လေးနှင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်းအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမျိုးသမီး ၁၀ ဦး နှင့်မအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်စိုက်ထူနိုင်ခြင်းကိုယုံကြည်မှုမရှိသောကြောင့် nofap ကိုစတင်ခဲ့သည်။
ယခုငါအချိန်ညာဘက်အခါ ED ရိုက်နှက်ငါ့နိုင်စွမ်းအတွက်လုံးဝယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြစ်၏။
ငါ့အပြား-တန်းစီ Experiment- သတိပေးချက်: သို့ရာတွင်အထောက်အထား
ငါမဆို 'စူပါအင်အားကြီး' 'ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ် ဦး ကိုက်ညီမှုထက်အခြားအထူးသဖြင့်ထင်ရှားခဲ့ကြဟုမပြောလိမ့်မယ်။ ငါမကြာခဏ PMO နှင့်ဆက်စပ်ကျပန်းအမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်မှဓားစာခံမဟုတ်တော့, ငါကျန်းမာဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ငါ့မကြာသေးမီကစွမ်းရည် attribute လိမ့်မည်ဟုဤအရည်အသွေးကိုဖြစ်ပါသည်:
ရက် ၂၀ အတွင်းမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက်တွင် (သူသည်ကျွန်ုပ်၏လိဂ်ထဲမှသူမထွက်ခွာသွားသော်လည်း) ကျွန်ုပ်တို့ယခုဆက်ဆံရေးရှိသည့်အချက်ကိုလိုက်လျှောက်ပြီးနောက်မကြာမီကျွန်ုပ်သည်ကြောက်လန့်စရာကောင်းသောအနေအထားတွင်ရှိနေသည်။ တစ်ညမှာငါတို့သူငယ်ချင်းများနှင့်ထွက်သွားသည်၊ သောက်စားသည်၊ သောက်စားသည်။ တကယ်တော့လုပ်နေတာနဲ့အမျှငါ့ရဲ့ချစ်သူလေးကတော့အလုပ်နဲ့မကိုက်ညီဘူး။ 🙁စိုးရိမ်ပူပန်စရာမရှိဘူး၊ ဝီစကီဒစ်ကိုပဲငါလွှဲလိုက်တယ်။
သို့သော်နောက်ဆက်တွဲပြflatနာမှာပြားပြားပြားဟုလူသိများသည့်ထူးဆန်းသည့်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဒီညဟာတစ်ပါတ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးလိင်ဆိုင်ရာအပြည့်အ ၀ မရှိခြင်းနဲ့အတူငါလာမယ့်အချိန်မှာငါပြန်ရနိုင်မလားဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်စပြီးစတင်ခဲ့တယ်။ ငါ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမရှိခဲ့ဘူး၊ အရင်တုန်းကမတီးတတ်ဘူး .. ဘာမျှော်လင့်ရမှန်းမသိခဲ့ဘူး။
ဒီရက်သတ္တပတ်တစ်လျှောက်လုံးလိင်ဆန္ဒအပြည့်အဝမရှိခြင်းကအမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်၏မိန်းကလေးနှင့်အတူရှိနေခြင်းမှလာသောအခါ၊ ငါဟာငါ့ ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ခံရဖို့သက်သေအဖြစ်အဖြစ်ယူနိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ငါဟာတကယ့်ဘဝအပြန်အလှန်အကျိုးသက်သက်သာသာဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတုန်းကသူမငါ့ကိုလှည့်စားနေတယ်ဆိုတာသိလိုက်တော့ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ဘ ၀ ကိုဖြတ်သန်းသွားမယ်လို့ထင်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့ကွဲသွားခဲ့တယ်။ သူမကကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာပါ။ ငါပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည် PMO ဖြစ်သည်ဟုမပြောနိုင်ပါ၊ တစ်ပတ်လျှင် ၂/၃ ကြိမ်၊ သို့သော်သူမနှင့်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံရန်တစ်ပတ်လျှင် ၃/၄ ကြိမ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ပြိုကွဲပြီးနောက်အချိန်ကြာမြင့်စွာငါအမှိုက်ပုံ၌နေကြ၏နှင့်ရှည်လျားဇာတ်လမ်းတိုတောင်းတဲ့တနင်္ဂနွေတွင်, တခါတရံတခါတရံတွင်2ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်ညစ်ညမ်းခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းတာကိုရပ်လိုက်သင့်တယ်၊
ငါဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့လှပတဲ့အမျိုးသမီး (ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိလက်ရှိ gf) နဲ့ကျွန်မထရပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနိုးထဖုန်းခေါ်ပြီးကျွန်မမှာ ED တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဖူးဘူး။ ဝေဒနာခံစားရသူချင်းတွေကောင်းကောင်းသိလိမ့်မယ်။ ကံကောင်းတာကသူမက endometriosis ကြောင့်သူမအရင်ကလိင်ဆိုင်ရာပြသနာတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ကျွန်မနဲ့အရမ်းရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။
ငါအအေးကြက်ဆင်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်လိုက်ပြီးချက်ချင်းရပ်လိုက်ပြီးမျဉ်းဖြောင့်သည်အုတ်တစ်တန်ကဲ့သို့အပြည့်ဖြင့်အသက်မဲ့ပြီးရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ၃ လခန့်ကြာသည်။ လိင်မှုကိစ္စကိုကျွန်တော်မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါ၊ သူမကငါ့ကို blowjob ပေးလိမ့်မယ်အကြိမ်စုံတွဲတစ်တွဲမှတ်မိခြင်းနှင့်ငါနှစ် ဦး စလုံးအနည်းဆုံးအဘို့အ demoralizing, ငါ Semi လွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုရနိုင်ဘူး။
ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေသို့ပြေးသွားသောအခါကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကို ၂ ပတ်ခန့်မတွေ့ရဘဲလများအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ချိုချိုသာသာခံစားခဲ့ရပြီးသူမကိုတွေ့ရန်နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်မစောင့်နိုင်ခဲ့ပါ။ ငါ ED အကြောင်းစိတ်မပူပါနဲ့၊ အဲ့တာကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ကျွန်မတို့တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံခဲ့ရတယ်။ အဲဒါထက်ပိုပြီးကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူး။ သူမ ၁၀ မိနစ်ခန့်အကြာတွင်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးသူမ ၁၀ မိနစ်ခန့်အကြာတွင်သတိထားမိပြီး၎င်းသည်ဖြုန်းတီးရန်မသွားပါစေနှင့်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ငါဟာအသစ်စက်စက်၊ ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်။ ငါဖတ်ပြီးသမျှအရာအားလုံး၊ ကံကောင်းပါစေ၊ သင်အမှန်တကယ် MVP များကိုနှစ်သက်သောယောက်ျားများအတွက်ကျေးဇူးတင်ရန်ဤအချက်ကိုရသောအခါစာတစ်စောင်ရေးရမည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုပြောကြားခဲ့သည်။
(thegreat123 မှ NPH) ကျွန်ုပ်သည် ၁၄၅ ရက်ကျော်လွန်ပြီးကျွန်ုပ်၌ဖုတ်ကောင်လိင်တံရှိသော်လည်းလိင်ဆက်ဆံသောအခါကျွန်ုပ်သည်စိုက်ထူခြင်းခံရသည်။ အဆိုပါနံနက်သစ်သားနှင့်အလိုအလျောက်စိုက်ထူသွားပြီ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်အချိန်နှင့်အမျှ porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမရှိဘဲအချိန်ကြာမြင့်စွာပြီးနောက်ဖုတ်ကောင်လိင်တံခံစားရခြင်းကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ငါ porn ကိုရှောင်ရှားရန်အလွန်လွယ်ကူရှာတွေ့နှင့်ငါ့လိင် drive ကိုပိုမိုဆိုးရွားလာသောအခါ၌ပင်ကြည့်ရှုရန်အလိုဆန္ဒရှိသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်
(thegreat123 NPH မှပြန်ကြား) ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်မှာလည်းလိင်တံသေပြီ။ ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလဲ။ နံနက်သစ်တောများသည်ရက်ပေါင်း ၃၀ မှ ၃၅ ခန့်အတွင်းဖြစ်ပျက်နေသည်။ သို့သော်ယခုတွင်နံနက်သစ်တောများနှင့်အလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းမရှိတော့ပါ။ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုရှောင်ရှားရန်လည်းကျွန်ုပ်လွယ်ကူသည်။ သင် ၁၄၅ ရက်ရှိနေပြီးပြissuesနာများရှိနေဆဲဟုဝေဖန်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါဒီအချိန်နှောင်းပိုင်း reboot လုပ်ငန်းစဉ်၌ငါသေသောလိင်တံခံစားနေရပြီးတစ် ဦး တည်းသာဖြစ်တယ်ထင်ပေမယ့်ငါပဲစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
မဟုတ်လူတိုင်း flatline မနှစ်မြို့ဖွယ်တွေ့:
ငါ၌စိတ်ကူးယဉ်နည်းနည်းရှိပြီးစိုက်ထူနိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုအနည်းငယ်သာရှိပြီးနံနက်သစ်သားလည်းမရှိပါ။ ငါနောက်ဆုံးတော့လိုအပ်နေတဲ့အနားယူဖို့ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုပေးနေတယ်ထင်တယ်။ တချို့ရက်တွေမှာ libido ပိုများလာတယ်။ ဒီပြည်နယ်ကိုငါထာဝရရောက်သွားနိုင်ပုံရတယ်။ ၎င်းအတွက်လိုအပ်သောအတွေးအခေါ်ကိုပြုစုရန်လများစွာကြာခဲ့ပြီးပြန်လည်ထူထောင်မှုအားလုံးသည်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်လက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့
ထို့အပြင်အလိုဆန္ဒများကိုလွှတ်လိုက်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းဆန္ဒရှိလိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်အတူအောင်မြင်လိုသည်မှာပါ။ ငါသူတို့ကိုအိပ်ရာထဲထည့်စရာမလိုဘူး သူတို့နှင့်ပျော်စရာကောင်းပြီးပတ်ပတ်လည်အရူးလုပ်ခြင်းသည်အောင်မြင်မှုပင်ဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းမများတန်ဖိုးထားပုံရသည်။ ထိုအခါငါအလှည့်၌ယခင်ကထက်အမျိုးသမီးအဆက်အသွယ်တန်ဖိုးထားတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၌များစွာကူညီသည်။
flatline ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်တုန့်ပြန်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဟာအဓိကကျတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အမျိုးသားများ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုသည်သူတို့၏လိင်တံပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အမှန်တကယ်လည်ပတ်နေသည် (သို့) သူတို့၏လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအခါစိုက်ထူတစ် ဦး involontary နှင့်သတိလစ်ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ခြင်း, ဒီထောင်ချောက်အမှန်တကယ်ယောက်ျားများအတွက်အလွန်ဘုံများနှင့်ခိုင်မာတဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်မစိတ်ဝင်တစားဖတ်ပါဦးမည် အဘယ်အရာကိုငါသည်ငါ့ရည်းစားကိုပြောပြသလဲ? တကယ်တော့ငါကမိန်းကလေး (မိန်းမ) သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့မျှဝေနိုင်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ငါဟာနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်၏ကန ဦး လှုံ့ဆော်မှုနောက်ကွယ်မှအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါထင်တာကမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုမျှဝြေခင်းဆိုတာဆက်ဆံရေးတစ်ခုရဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်တယ်။ ဆိုလိုတာက၊ ငါဟာညစ်ညမ်းတဲ့ထောင်ချောက်ထဲကျခြင်းဟာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေမှာကိုယ့်ခံစားချက်တွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဝေမျှနိုင်ဘူးလို့လည်းဆိုလိုတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ED သွေးဆောင်မှု၏အပြုသဘောဆောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတောင်ငါမြင်ချင်တယ်၊ ငါလိုချင်တာ၊ ငါလိုချင်တာကိုမျှဝေချင်တယ်၊ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းချိတ်ဆက်ချင်တာကငါ့ရဲ့တစ်ခုလုံးဆီကအချက်ပြမှုမျိုး။ ထူးဆန်းသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်порноအားဖြင့် ED သွေးဆောင်ခြင်းကို ED အနေဖြင့်၎င်းကိုရရှိရန်အခွင့်အရေးနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်မြင်သည်။ 🙂ဆိုလိုတာကတော့ငါက ED ကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့ရောဂါမရှိဘူးဆိုရင်၊ ငါက porn နဲ့ချိတ်ဆက်မိလိမ့်မယ် ကြော်ငြာ eternumနှင့်အမှန်တကယ်တစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းအဆင့်တွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့လိုခငျြတာပါ။
အဆိုပါ flatline နောက်ကွယ်ကသိပ္ပံအပေါ်နောက်ထပ်ထောင့်